အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: October 2007
ကိုစိုး | အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ဖမ်းဆီးထားသူများထဲမှ ယမန်နေ့ညက ပြန်လွှတ်ပေးသည့် ၇ ဦးတွင် အများစုမှာကျန်းမာရေး ထိခိုက်နေကြကြောင်း သိရသည်။ပြန်လွတ်လာသူ ၇ ဦးထဲမှ ဦးမြင့်သိန်းအပါအ၀င် ဦးဟန်ဇော်၊ ဒေါ်လဲ့လဲ့နှင့် ဦးဗလတို့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) မှဖြစ်ပြီး ကျန်လူများမှာ ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီဥက္ကဌ ဦးကျင့်ရှင်းထန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ယူအန်အယ်လ်ဒီ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထောင်ခိုထန်းနှင့် အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်တို့ ဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။“ကျန်းမာရေးကတော့ အားလုံးချွတ်ယွင်းနေကြတယ်၊ ဒီနေ့ ဆေးစစ်ဖို့ လုပ်နေကြတယ်၊ မနေ့ညက လွတ်တဲ့ ၇ ဦးထဲက ဦးမြင့်သိန်း၊ ဦးဟန်ဇော်၊ ဒေါ်လဲ့လဲ့တို့ဟာ ဆေးစစ်ဖို့လိုနေပါတယ်၊ လူတွေ ၀ိတ်တွေလည်း အတော် ကျနေကြတယ်၊ ဦးကျင့်ရှင်းထန်နဲ့ကတော့ ကျနော် မတွေ့ရသေးပါဘူး”ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ဖမ်းဆီးခံရသူများသည် အပြစ်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ခန့် ပြန်လွှတ်ရန် ကျန်ရှိနေသေး ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ၃၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။“ဂန်ဘာရီ၊ ပီညဲရိုးခရီးစဉ်တွေနဲ့ အစိုးရဘက်ကတော့ ဆက်စပ်ကောင်း ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်၊ ကျနော် သိတာကတော့ ကျနော်တို့လူတွေက ဘာအပြစ်မှ မကျူးလွန်ဘဲ အဖမ်းခံရတာ၊ အစိုးရဘက်က ဘယ်လို ယူဆသလဲ ဆိုတာကတော့ ကျနော် မပြောတတ်ဘူး၊ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ လောက်လွတ်ဖို့ ကျန်နေသေးတယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းရပါတယ်”ဟု လည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။ယူအန်အယ်လ်ဒီ မှ ဦးထောင်ခိုထန်းသည်လည်း ယမန်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ခန့်က နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာရာ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာသောကြောင့် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ က ပြောသည်။“ကျမ ယောက်ျား အခုလိုပြန်လွတ်လာတာကိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတယ်၊ ထောင်ထဲမှာ သွေးတိုးဖြစ်လာလို့ အခုဆေးကုနေရတယ်”ဟုလည်း ဦးထောင်ခိုထန်း၏ ဇနီးကပြောသည်။ဦးထောင်ခိုထန်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အေအယ်လ်ဒီ) ဥက္ကဌ ဦးအေး သာအောင်က “ထောင်ထဲမှာ သူကောင်းကောင်း မအိပ်ရဘူး၊ အာဏာပိုင်တွေက နေ့ရောညပါ မေးခွန်းတွေကို လာလာမေးနေတော့၊ သူအိပ်လို့မရအောင် နှောင့်ယှက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်”ဟု ပြောပြသည်။ဦးထောင်ခိုထန်းသည် အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လွတ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲတွင် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ခြင်းကို ဆက်လက် ၍ကံဆောင်နေသော သံဃာတော်တချို့နှင့်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါ သံဃာတော်များသည် အာဏာ ပိုင်များကပ်လှူသည့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုများကို ယခုအချိန်အထိလက်မခံကြကြောင်း၊ နေ့လွဲညစာသုံးဆောင်ခြင်းလည်း မပြုကြောင်း ဦးထောင်ခိုထန်းကပြောပြသည်ဟု ဦးအေးသာအောင်က ဆိုသည်။ယခု ပြန်လွတ်လာသော အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိုင်သည်လည်း ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ် ထောင်တွင်း၌ သွေးတိုးရောဂါ ကိုခံစားရ ကြောင်း၊ ဦးဝင်းနိုင်သည် မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသော သံဃာတော်များ အား ဆွမ်းကွမ်း စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ကပ်လှူသည့်အတွက် အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ယမန်နေ့က မန္တလေး ထောင်မှလည်း ဖမ်းဆီးထားသူ ၃၂ ဦး ကို အာဏာပိုင်များက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။္စဧရာဝတီအင်တာနက်စာမျက်နှာမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ငွေကြာယံကျောင်းတိုက် ပညာဒါနကျောင်း ယခုနှစ်မဖွင့်နိုင်
ကိုသက် | အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ငွေကြာယံ ပရိယတ္ထိစာသင်တိုက်တွင် နှစ်စဉ်ဖွင့်နေကြဖြစ်သည့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာဒါနသင်တန်းများ ယခုနှစ်မဖွင့်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ပညာဒါနသင်တန်းများကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိပြီး ငွေကြာယံ ကျောင်းတိုက်၌ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့်တကွ သံဃာတော်များမရှိကြသောကြောင့် သင်တန်းများ မဖွင့်နိုင်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။“တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာနဲ့ သင်္ကန်းကျွန်းက ဆယ်တန်းတနှစ်ကျပြီး ပြန်မတက်နိုင်တဲ့ အလုပ်တဖက်နဲ့ကလေးတွေအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ကျောင်းပါ။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ထောင်နဲ့ချီပြီး တက်ကြပါတယ်” ဟု ပထ၀ီဘာသာသင်ကြားဖူးသည့် ကျူရှင်ဆရာ ဦးအောင်ခိုင်စိုးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများအား ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်း၌ မဏ္ဍပ်ထိုးကာ ပညာသင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိအောင်မြင်သည့် ကျူရှင်ဆရာများက ကုသိုလ်ဖြစ် အခမဲ့သင်ကြားပေးကြခြင်းဖြစ်၍ အပြင် ကျူရှင်စရိတ် မတတ်နိုင်ကြသည့် နေ့ကျောင်းတက်နေသူများလည်း လာရောက်သင်ယူကြသည်ဟု ဦးအောင်ခိုင်စိုးက ပြောသည်။ငွေကြာယံ ပရိယတ္ထိစာသင်တိုက်၏ ဆရာတော် ဦးရေ၀တမှာ နိုင်ငံတော် သံဃာမဟာနာယကအဖွဲ့၊ အမှတ် ၂ အဖွဲ့မှ ဒုဥက္ကဌ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဆရာတော် ၄၇ ပါးဖြင့် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ခွဲကာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး တဖွဲ့လျှင် ဆရာတော် ၁၅ ပါးခန့် ပါဝင်သည်။ ယခုအခါ သံဃမဟာနာယကဆရာတော်များကို ကျောင်းပြန်ခွင့်မပေးဘဲ ကမ္ဘာအေး ဘုရားဝန်းအတွင်းရှိ သာသနာ့နယ်မြေတွင် အာဏာပိုင်တို့က ခေါ်ယူထားသည်ဟု သာသနာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီကျော်တွင် လက်နက်ကိုင်စစ်သားနှင့် လုံထိန်း ၂၀၀ ကျော်တို့က မျက်ရည်ယိုဗုံးနှင့် သေနတ်များသုံး၍ စီးနင်းကြပြီး သံဃာတော်အပါး ၁၀၀ ကျော်ကို အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးကာ လူဝတ်လဲလိုက်သည်ဟု သာသနာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။ နောက်တနေ့၌ ငွေကြာယံတွင် ကျန်နေသေးသည့် သံဃာများကို ထပ်မံဖမ်းဆီးပြီး ကမ္ဘာအေးဘုရားဝန်းအတွင်းရှိ သာသနာ့နယ်မြေတွင် သင်္ကန်းမချွတ်ဘဲ ထားသည်ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလတွင် သင်တန်းများဖွင့်မည့်နေ့ရက်ကို “ငွေကြာယံ ပညာဒါနအလှူတော်” ဟူသည့် စာသားပါ ဆိုင်းဘုတ်များအား ငွေကြာယံကျောင်းဝနှင့် တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ တောင်ဒဂုံနှင့် မြောက်ဒဂုံ စသည့် မြို့နယ်များရှိ လမ်းမများတွင် ကြော်ငြာထားလေ့ရှိပြီး ၎င်းဆိုင်းဘုတ်များကို ယခုနှစ်မတွေ့ရကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ် များတွင် နေထိုင်သူများက ပြောသည်။ “အလကားသင်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် သာသနာ့နယ်မြေဖြစ်တာကတကြောင်း၊ ပညာကိုတကယ်လိုလားတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်ကြတာကတကြောင်းရယ် ဆရာတော်က စည်းကမ်းနဲ့ကိုင်တွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လာတက်တဲ့ကလေးတွေဟာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ကြိုးစားကြတယ်” ဟု ဦးအောင်ခိုင်စိုးက ပြောသည်။၂၀၀၀ ခု ပညာသင်နှစ်တွင် ငွေကြာယံ ပညာဒါနသင်တန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကာ အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သူတဦးက “အခုလိုကြားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ မရှိတဲ့သူတွေက အဲဒီကျောင်းကို အားကိုးပြီး တက်နေကြတာ ဆိုတော့ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက် ပညာသင်ဖို့ အခွင့်အရေး တော်တော်နည်းသွားတာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ ဧရာဝတီအင်တာနက်စာမျက်နှာမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
အန်ဒါမန်ဟီးရိုး အောက်တိုဘာ ၃၀ ၊ ၂၀၀၇ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ၊တပါးနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေရတာဟာစစ်အစိုးရကလူထုတွေကိုလျစ်လျူရှု့ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊မဲဆောက်မြို့ တွင်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့၊မြန်မာအ လုပ်သမားတွေကိုအောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ အာရုံတက်ချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်တဲ့ဌာနပေါင်းစုံပေါင်းစုံကမဲဆောက်တမြို့ လုံးမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်မရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေ ၂၀၀ ကျော်ကိုသူတို့ ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့၊သူတို့ ကိုတစုံတရာအရေးယူမှမဟုတ်ပဲ၊မြန်မာနိုင်ငံဖက်ကိုပဲပြန်ပို့ မယ်လို့မဲဆောက်ရဲမှူးကြီး၊ဖတ်စ၀သ် တင်ကျွိ ကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုမြ၀တီ ဖက်ကိုပြန်မပို့ မီ၊ရဲစခန်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားသွားပါတယ်။ ထိုင်းရဲတွေက၊မဲဆောက်မြို့ မှာတရားမ၀င်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုနေ့ စဉ်လိုလို၊ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။အခုနှစ်မှာသတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့လိုမျိုးမှာတောင်မှဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာရဟန်းသံဃာဦးဆောင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစစ်အစိုးရကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေျးလှုပ်ရှားတဲ့ရဟန်းတွေနဲ့ လူ၊ကျောင်းသားတွေထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုခိုးဝင်လာပြီးတော့၊စစ်အစိုးရကိုဆန့် ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်လာမှာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲမှူးကြီးကပြောပါတယ်။ အခုလဆန်းပိုင်းမှာမဲဆောက်ကမြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာထိုင်း၊မြန်မာချစ်ကြည်တံတား၊မဲဆောက်မြို့ ဖက်မှာတကြိမ်၊မဲဆောက်က၊ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့ မှာတကြိမ်၊မြန်မာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဖက်ဆစ်ဝါဒ
ဘာတေး လင့်တ်နာ | အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အကယ်၍ ကားလ်မာ့က်စ်သာ မှန်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် သမိုင်းက ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အဖြစ် တပတ်ပြန်ကျော့လာသည်ဟု ဆိုရ မည်ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းနေသောအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဤ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အဆင့်တွင်သာ ပိတ်ဆို့ ရပ်တန့်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းများအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုများ သည် အရေးနိမ့်ခဲ့ရသော ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးနှင့် အလားတူ ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရဖွယ် ဖြစ်သည်။ အချိန်ရလာ သည်နှင့် အမျှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက လူထုကို ကောင်းစွာ ရိုကျိုးလာစေရန် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏ မခံ မရပ်နိုင် ဒေါသထွက်ရမှုများသည်လည်း ထိရောက်မှုမရှိသော အဆံပလာ တုံ့ပြန်ချက်များအဖြစ် ပြောင်းသွားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံး ချုပ်ငြိမ်းသွားသည့် အနေအထားရောက်ခဲ့ရသည်။အရှေ့ဥရောပနှင့် ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော “အရောင် တော်လှန်ရေးများ” နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို အောင်ပွဲခံနိုင်မည်ဟု တွက်ဆခဲ့ကြပြီး အစပိုင်း လူအများ စိတ်တက်ကြွနေဆဲကာလတွင် အနောက်တိုင်းသတင်းမီဒီယာများကလည်း “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး”ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းက ဦးဆောင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည့် ရဟန်းသံဃာတော်များကို ရည်ညွှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တချိန်က အာရှဒေသအတွင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့သည့် နိုင်ငံကို ဆင်းရဲမွဲတေကပ်ဆိုက်စေခဲ့သော၊ လူအများက လိုလားလက်ခံမှုလည်း မရှိတော့ပြီဖြစ်သော စစ် အစိုးရကို အပြီးတိုင် ဖြုတ်ချနိုင်တော့မည်ဟု မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသောကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ရဟန်းတော်များ၏ စိတ် ဓာတ်ရေးရာပိုင်းအရ လွှမ်းမိုးထားနိုင်သည့် အရေးပါသော သြဇာတိက္ကမ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ များကြောင့် ပြင်ပကမ္ဘာသို့ သတင်းများ လျှင်မြန်စွာစီးဆင်းလာနိုင်မှု အနေအထားတို့ ပေါင်းစပ်၍ လူအများတွင် ဤကဲ့သို့ အကောင်းဘက်ပြောင်းလဲ လာတော့မည့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အစိုးရက လည်း ပိုမိုပြင်းထန်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်လာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ယခင်က ဖိအားပေးစကား အလျှင်းပြောကြား ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ) တို့ကပါ ပြင်းထန်သောစကားလုံးများဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်များ ပြုလာခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့အမှန်တရားမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အခြေအနေနှင့် စာလျှင် သိသိသာသာ မည်သို့မျှ ပြောင်းလဲလာမှု မရှိသေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် မြန်မာစစ်အစိုးရက ယခင်ကထက်ပင် ပိုမို၍ အားကောင်းလာခဲ့သည်။ စစ် အစိုးရအနေဖြင့် ကြုံဆုံရင်ဆိုင်လာရမည့် အသစ်သော ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဆန့်ကျင်ဝေဖန်မှု မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား အဆင်သင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆက်ဆက်သော စစ်အစိုးရများ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုမှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေး အတွင်း ထူးခြားအံ့ဖွယ်များအနက် တခုဖြစ်နေခဲ့ရသည်။ ဤပဟေဠိပုစ္ဆာ အတွက် အဓိကကျသော အဖြေမှာ ရန်ကုန်ရှိ စစ်အစိုးရကို နားလည်ထားရမည့် အချက်မှာ “သာမန်” စစ်အစိုးရမျိုး မဟုတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အခြားသော ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများ၏ စစ်အစိုးရများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ ၎င်းက နိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာကိုသာ ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မဟုတ်၊ စီးပွားရေးအာဏာကိုပါ ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် “မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ” ကျင့်သုံးမည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု များ အားလုံးကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်တပ်က ဦးစီးချုပ်ကိုင်ထားသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းတချို့ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည်။ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နွယ်ဖွား အများစုဖြစ်သည့် ယခင်ကုန်သည်ကြီးဓနရှင်များလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ စွန့်ခွာထွက်သွားခဲ့ ကြရပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတတ်အများစုလည်း ထွက်ခွာခဲ့ကြရသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှု မတိုင်မီက အရှေ့ တောင်အာရှ နိုင်ငံများအနက် လူနေမှုအဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပညာတတ်လူဦးရေအများစု ရှိခဲ့သော နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ စစ်တပ်သည်သာ တိုင်းပြည်၏ထိပ်သီး လက်ရွေးစင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ ယန္တယားသည်လည်း နိုင်ငံကြီးအတွင်း နိုင်ငံလေးဆောက်ထားသည့်သဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ တပ်မတော်သားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ မှီခိုသူများမှာ အထူးအခွင့်အရေးခံများ ဖြစ်ကြပြီး သာဓကအားဖြင့် ထိုင်း နိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ စစ်တပ်များထက် အခွင့်အရေးပိုယူထားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ယေဘုယျ အားဖြင့် သဘောထားကွဲလွဲတည်ရှိနေကြသည့် ဗဟုအယူအဆကို အနည်းနှင့်အများ ဆိုသလို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြပြီး စစ်အာဏာရှင်များ အုပ်စိုးထားသော အမှောင်လွှမ်းသည့်ကာလများတွင်ပင် အခြားအင်အားစုများက ရှင်သန်လှုပ်ရှားခွင့် ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သော ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီးအပြီးတွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို တခန်းရပ်နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဖြိုခွဲချေမှုန်းမှုကို ပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြသော နိုင်ငံ တကာ အသိုက်အ၀န်းကို အနည်းဆုံးချွေးသိပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သကဲ့သို့ တဘက်တွင်လည်း လွတ်လပ်သောဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်တွင် သူတို့စစ်တပ်အတွက် ပိုမိုအကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်သည်ကို သဘောပေါက်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး လူ ၃,၀၀၀ ကျော် အသက်ဆုံးခဲ့ရသော ၁၉၈၈ ခုနှစ် သွေးထွက်သံယိုချေမှုန်းမှုများအပြီး အာဏာသိမ်း စစ် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ကာ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် အရင်းရှင်စနစ်ကို အစားထိုးခဲ့ပြန်သည်။ သို့သော်လည်း အနှစ်သာရမှာ စစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသော စီးပွားရေးစနစ်သာ ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်က တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိသော၊ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးသမားများ က ချုပ်ကိုင်မထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟူ၍ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးသမားများ တွင် အသက် ၄၃-နှစ်အရွယ် ဦးတေဇက တဦးအပါအ၀င် ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ၎င်း၏မိသားစု နှင့် နီးစပ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ ဦးတေဇပိုင် ထူးထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်သစ် “နေပြည်တော်” ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ရသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအနက် တခုလည်း ဖြစ်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီတခုမှာ အေးရှဝေါအုပ်စုဖြစ် ပြီး လော်စစ်ဟန်၏သားဖြစ်သူ စတီဗင်လော ခေါ် ဦးထွန်းမြင့်နိုင်က ဦးဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ လော်စစ်ဟန် မှာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် အမေရိကန်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ရွှေတြိဂံဒေသအတွင်း ဘိန်းဘုရင် ဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်နှင့် စစ်တပ်မိသားစုများအတွက် အထူးကျောင်းများနှင့် ဆေးရုံများလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့က သီးခြား ခွဲခြားထားသော၊ အစိုးရက ထောက်ပံ့ထားသော အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ခွင့်ရှိကြပြီး ပြင်ပကုန်စုံဆိုင်များတွင် မရနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ၀ယ်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရကြသည်။ စစ်တပ်က ထုတ်ပေးထားသည့် လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူက ရထား၊ လေယာဉ်များတွင် ထိုင်ခုံ လွယ်လင့်တကူ ၀ယ်ယူရနိုင်ကြပြီး ၎င်းတို့က စည်းကမ်းဥပဒေ ချိုးဖောက်လျှင်လည်း ရဲများက အရေးမယူဝံ့ကြပါ။ စစ်တပ်၏ အရံအင်အားဟု ဆိုကြသည့် လူထုနောက်ခံအင်အားရစေ ရန် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း(USDA) ကိုလည်း ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြန်သည်။ ဤအဖွဲ့က ယခု အခါ အဖွဲ့ဝင်အင်အား ၂၁ သန်းရှိနေပြီဟု ကြွေးကြော်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် အရပ်သား များကို မ၀င်မနေရ အတင်းအကျပ် ထည့်သွင်းထားမှုများကြောင့်သာ ဖောင်းပွနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်သည့် တိုင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေခဲ့သော မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ကဲ့သို့ပင် အခြေမခိုင် သည့် သဲရုပ်တု သဲရဲတိုက် သဖွယ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၉ နှစ်ကာလက မဆလပါတီပြိုကျခဲ့ သကဲ့သို့ပင် လူထု လှုပ်ရှားမှု လှိုင်းထန်လာချိန်၌ ပြိုလဲကျဆင်းရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်တန်ခိုးထွားလာခြင်းက ဗြိတိန်ထံမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာ မတင်ကပင် စလာခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်သူပုန်များက ရန်ကုန်အစိုးရကို အုံကြွဆန့်ကျင် ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် မော်စီတုန်းဦးဆောင်သည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကို အရေးနိမ့်ထွက်ပြေးလာသည့် ချန်ကေရှိတ် တရုတ်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်များက နေရာယူထားခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရစဉ်ကာလက မြန်မာ့ တပ်မတော်မှာ အင်အား ၁၅,၀၀၀ ခန့်နှင့် ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချို့သာ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်အင်အားက တပ်သား ၄၀,၀၀၀ အထိ တိုးချဲ့လာခဲ့ပြီး အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ် သော သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ခြေချပတ်သက်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကြီးအတွင်း နိုင်ငံငယ်တည်နေရာမှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်တခုလုံးကိုပါ စစ်တပ်က၀ါးမြိုခဲ့တော့ သည်။ ထိုအချိန်တွင် စစ်တပ်အင်အားက ၁၀၄,၂၀၀ အထိ ရောက်လာခဲ့ပြီ။ နောက်ပိုင်း ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်အင်အား ၁၄၀,၀၀၀ အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ၁၆၀,၀၀၀၊ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် တပ်မတော်ကြည်း အတွင်း၌ ၁၈၀,၀၀၀ နှင့် အခြားတပ်ဖွဲ့ ၃ ခုပေါင်းလျှင် ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်အထိ ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်တွင်တော့ ကြည်း-ရေ-လေ စစ်တပ်အင်အားစုစုပေါင်းမှာ ၄၀၀,၀၀၀ ခန့်အထိ တိုးတက်လာသည်ဟု ခန့်မှန်းကြ ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ခေတ်သစ် သမိုင်းတလျှောက်လုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အကောင်းမွန်ဆုံး လက်နက်တပ်ဆင်ဖြည့်ဆီး ထားနိုင်သော ကာလလည်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ လက်နက်များ အလုံးအရင်းနှင့် ၀ယ်ယူဖြည့်တင်းထားခဲ့ သည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့ ဖြည့်တင်းမှုမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်သူပုန် အင်အားစု များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီထားသော ကာလတွင်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တာကာလအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် တိုက်ပွဲများ တခြိမ်းခြိမ်းနှင့် ဆူပူမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်တန်းဒေသများတွင် တိုက်ပွဲဟူ၍ ကျိုးကြဲမျှသာ ရှိနေခဲ့သည်။ ယခုတကြိမ်တွင် ပစ်မှတ်ထားသော ရန်သူမှာ ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးဖြစ်နေ တော့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ပံ့ပိုးပေးနေမှုကလည်း စစ်တပ်က အာဏာမြဲနေနိုင်ခြင်းအတွက် အကြောင်းတခု ဖြစ်နေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ လိုလားမှုက “တည်ငြိမ်မှု” ဖြစ်ပြီး အစိုးရ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားပါ။ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလက အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့ ဦးဆောင်၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာ့အရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် တင်သွင်းခဲ့ရာတွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအများက ထောက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက ရုရှားနှင့်အတူ ဗီတိုအာဏာသုံးကာ ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟု သူတို့ မယူဆကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံက ခုခံပြောဆို ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစိုးရဖိနှိပ်နေမှုများအတွက် ဆွေးနွေးရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် လုံခြုံရေးကောင်စီသည် နေရာမှန် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဆိုခဲ့ပါသည်။ လှုပ်ရှားသူများက ၂၀၀၈ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ဘေဂျင်းအိုလံပစ်ကို ၀ိုင်းဝန်းသပိတ်မှောက်ပါရန် တောင်းဆိုနေသည့်ကြားမှပင် တရုတ်နိုင်ငံက ပြောင်းလဲလာ၍ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပြစ်တင် ဝေဖန်ရန် အလားအလာ မတွေ့ရသေးပါ။ ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရက်စက်စွာချေမှုန်းမှုများအတွင်း မြင်တွေ့ခဲ့ကြရ သော ဓာတ်ပုံများအရ မြန်မာစစ်သားများက တရုတ်နိုင်ငံလုပ် တီ-၅၆ (T-56) မောင်းပြန်သေနတ်များဖြင့် ကိုင်စွဲချေမှုန်းခဲ့ ကြသည့် အပေါ်တွင်လည်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှု မပြုခဲ့ပါ။ ဤမငြိမ်မသက်မှုများကို ဖြိုခွဲရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံက ပါဝင်ကူညီပေးမှု မရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာ့တပ်မတော် ခေတ်မီရေးအစီအစဉ်များက စစ်တပ်အတွင်း တပ်မတော်သားများ သစ္စာရှိမှုကို ခိုင်မာစေပြီး ဤအရေးပါသော အချက်ကြောင့် လက်ရှိ စစ်အစိုးရတည်မြဲနေရသည်ကို ငြင်းမရနိုင်ပါ။ စစ်တပ်က ညီညွတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး အပြောင်းအလဲဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ထား၍ မရနိုင်သကဲ့သို့ စစ်တပ် အတွင်း အကွဲအပြဲရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်သော သတင်းများကိုလည်း ထူးထူးခြားခြား မကြားကြရပါ။ အာဏာ အလွဲသုံးစား လုပ်နေမှု၊ ခံစားနေကြရသော အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် ကြိုက်သလို နှိပ်စက်ခွင့်ရနေသမျှကာလပတ်လုံး နိုင်ငံကို ပိုမိုဖွင့်ပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေခြင်းဖြင့် စစ်တပ်အတွက် အကျိုးများစေမည် မဟုတ်ပါ။ ဆုံးရှုံးနစ်နာဖွယ် သာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်တပ်က မြင်ကြပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံခြားတွင် အခြေစိုက်ထားကြသော အတိုက်အခံအဖွဲ့များက “တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး”၊ “အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး” ဟူသော စကားလုံးများကို ပြောဆိုရန် နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မည်။ သို့ သော်လည်း လူကြားကောင်းရုံ စကားလုံးများသာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီလှပါ။ အကြောင်းမှာ စစ်တပ်က ၎င်းကိုယ်တိုင်မှလွဲ၍ အခြားမည်သူနှင့်မျှ စကားပြောမည် မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အနောက်တိုင်းသံတမန်တဦးက တချိန်က မိမိကို ပြောင်ပင် ဖွင့်ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ “သူတို့ကြောက်နေ တာကတော့၊ တကယ်လို့ သူတို့သာ အတူတူတွဲမနေကြဘူးဆိုရင် တကွဲစီ ကြိုးပေးခံရမှာကို ကြောက်နေတာပဲ” ယခုလည်း စစ်အစိုးရက ၎င်း၏ကျမ်းရိုးစာသားများကို ပြန်လှန်ဖတ်နေကြပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ “အဖျက်အမှောက်များ” “ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖျက်သမားများ”ကို စွပ်စွဲ အပြစ်ပုံချနေကြပြန်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သူရမြင့်မောင်က ပြောသော မိန့်ခွန်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ (လွန်ခဲ့သော ၁၈-နှစ်ကာလကပင် ပြို ကွဲခဲ့ပြီဖြစ်သည့်) ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ လက်ကျန်များ၊ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများ စသည့် “နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်” အင်အားစုများက သံဃာများနှင့် အခြားသူများ ဆန္ဒပြစေရန် သွေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါ သည်။ ထို့အပြင် သူက ဤ အခြေအနေကို “ငြင်သာစွာ” နှင့် “သတိကြီးစွာဖြင့်” ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်နေကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါသေးသည်။ ယခုအခါ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု အပြီး၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ) ကိုလည်း ချိနဲ့အောင် နှိပ်ကွပ် ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ လူထုထောက်ခံမှုရှိသော်လည်း အိမ်အကျယ် ချုပ် ချခံ ထားရသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတခုလုံး မဟုတ်လျှင်သော်မှ မူလပါတီစတင် တည်ထောင်ခဲ့သူတို့ မှာ သေသူ သေ၊ ထောင်ကျသူကျဖြင့် ပြန့်ကျဲနေပြီဖြစ်ပြီး တချို့မှာလည်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ၏ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်အများစုမှာလည်း ထောင်ချခံရ၊ ကျိုးနွံအောင်နှိပ်ကွပ်ခံရ၊ ပြည်ပ ထွက်ပြေး ကြရဖြင့် ရှိနေခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီဖြစ်သည့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ လူကြီးတချို့သာ ကျန်ရှိနေတော့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံး မှာလည်း ပါတီကို ဆက်လက်သယ်ဆောင်နိုင်မည့် စည်းရုံးရေးအင်အားနှင့် လူထုထောက်ခံမှု မရှိကြ။ ၎င်း၏ တည်ရှိနေမှုက စစ်တပ်အတွက် ပို၍ အကျိုးဖြစ်နေစေတော့သည်။ ပြင်ပ ကမ္ဘာက မျှော်ကြည့်ပါက အန်အယ်လ်ဒီသည် စစ်တပ်မဟုတ်လျှင် အစားထိုးနိုင်ဖွယ် အင်အားစုတခုအဖြစ် မမြင်ကြတော့ပါ။ ပြင်ပအင်အားစုများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်များအပေါ် ထူးထူးခြားခြား သြဇာမညောင်းလှပါ။ အနောက်ကမ္ဘာက ပိတ်ဆို့ချမှတ်ထားသော အရေးယူမှုများကလည်း အနည်းငယ်သာ အာနိသင် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အိမ်နီးချင်း အေဆီယံနိုင်ငံများက ဆက်လက်ကုန်သွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပါသည်။ ဤအနေ အထား တွင် မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖောသီကြွယ်ဝသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အသုံးချရင်း၊ ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာကျသည့် ပထ၀ီအနေအထားကို အသုံးချကစားရင်း ဆက်လက် ရပ်တည်နေနိုင်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသော အရင်းအမြစ်များကို တရုတ်နိုင်ငံက ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ မတိုင်မီကပင် မျက်စိကျနေခဲ့ကြပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး ဒု ၀န်ကြီးဟောင်း ပန်ကျီ (Pan Qi) က ၁၉၈၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘေဂျင်းရီဗျူး၌ “အနောက်တောင်ဘက်ကို တံခါးဖွင့်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တဦး၏အမြင်” ဟူသော ဆောင်းပါး တစောင် ရေးသားခဲ့ရာ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်များဖြစ်သော ယူနန်နှင့် စီချွမ်ပြည်နယ်များကို တိုးတက် လာစေရန် မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်၍ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ လမ်းကြောင်းရှာနိုင်မည့် အလားအလာကို ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်း ရထားလမ်းဆုံး မြစ်ကြီးနားနှင့် လားရှိုးမှ ရထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းမှ သော်လည်းကောင်း တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့နိုင်သည့် အခြေအနေကို ဖော်ပြရေးသားထားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလတွင် တရုတ်ကျွမ်းကျင်သူများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ညံ့ဖျင်းလှသော ကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်း များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အဦ စီမံချက် အများအပြားကို ကူညီခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင် တရုတ် စစ်ရေးအကြံပေးများလည်း ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များကာလက မြန်မာ့တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အတွက် သြစတေးလျအကြံပေးများ ရောက်လာခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြား စစ်အကြံပေးများ ပြန်လည် အခြေချ ရောက်ရှိလာကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော တရုတ်လက်နက်တန်ဖိုး ပမာဏ စုစုပေါင်းကို မသိရှိကြရပါ။ သို့သော်လည်း ထောက်လှမ်းရေးသတင်းရပ်ကွက်များ အဆိုအရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၄ ဘီလီယံမျှ ရှိမည် ဟု ခန့်မှန်းကြပါသည်။မြန်မာနှင့် တရုတ်အာဏာပိုင်များ နီးကပ်ဆက်ဆံလာမှုအပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း အစိုးရိမ်ပိုလာပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြီးထွားလာနေသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ချေဖျက်နိုင်ရန်အတွက် ကနဦးတွင် အိန္ဒိယက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း အနီးကပ်ကာလ အနာဂတ်တွင် အာဏာရလမ်းမမြင်သည့် အခြေအနေကို သဘောပေါက်လာကြသည့်အခါ အိန္ဒိယကလည်း စစ်အစိုးရဘက် ယိုင်လာပါတော့သည်။ နယူးဒေလီ အစိုးရ၏ လိုလား ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်သြဇာမှ ကင်းဝေးစေရေးမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ကြီးထွားတိုးတက်လာနေသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစနစ်ကို လောင်စာကျွေးရန် လိုနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါကြွယ်ဝလှသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကိုလည်း ရယူ တင်သွင်း လိုနေကြပါသည်။ မကြာသေးမီကာလ အရေးအခင်းများတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် စည်းနှောင်သက်ဝင်မှု ရှိသော မြန်မာ့အရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ မချနိုင်စေရန် တားဆီးပိတ်ပင်နေသကဲ့သို့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်း အနှစ်အသားမပါသော ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသာ ပြုနေခဲ့ပါသည်။ “အိန္ဒိယ အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်းနှင့် အနီးကပ်လေ့လာနေကြောင်း၊ အင်အားစုအသီးသီးက ပြဿနာကို ငြိမ်းအေးစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အစီအစဉ်များတွင် အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်နိုင်စေရန်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစဉ်သဖြင့် ယုံကြည်ထားပါကြောင်း” မျှသာ ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေအနေများကြောင့် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက အာဏာခြေကုတ်မြဲနေနိုင်ကြပြီး အနောက်ကမ္ဘာ၏ ပြစ်တင်ရှုံ့ချမှုများ ကိုလည်း အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိလှပါ။ သို့သော်လည်း သူတို့အတွက် လုံးဝအခြေခိုင် လုံခြုံလှပြီဟုတော့ မဆိုနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ မြန်မာပြည်သူအများက သူတို့ကို အလွန်အမင်း မလိုလားကြောင်း သိထားကြပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း တွင် လှုပ်ရှားမှုများက အသစ်တဖန်ပြန်၍ ပုံပေါ်အားကောင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံမှ ထွက်ပေါ် လာသည့် ၀ါရင့်လှုပ်ရှားသူများလည်း ပြန်ပါလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် အထင်ရှားဆုံးမှာ မင်းကိုနိုင်ဖြစ်ပါသည်။ စစ် အစိုးရက ၎င်းကို ၁၉၈၉ ခု မတ်လတွင်ဖမ်းဆီး၍ တကိုယ်တည်း ၁၆ နှစ် နီးပါးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလက မင်းကိုနိုင်မှာ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် သတ္တဗေဒ ကျောင်းသား တဦးသာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထောင်သောင်းချီသော လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောလှုံ့ဆော်ဦးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သူ ထောင်မှ လွတ်လာသည့် အခါ အသက် ၄၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ထောင်တွင်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များက သူ၏မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာတွင် အထင်းသား ကျန်ခဲ့ပါ သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် သူ့ကိုမြင်ရသည်မှာ ရုပ်ရင့်ရော်သွားခဲ့ပြီး အိုမင်းသွားပုံ ပေါက်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုမူ စစ်အစိုးရက မဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ “မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ မတရားမှုတွေကို ငြင်းဆန်လိုက်ဖို့၊ အမှန်တရားကို အမှန်အတိုင်းပြောဖို့ သတ္တိရှိရပါလိမ့်မယ်”ဟု၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း အသစ် ပြန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် “၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အင်အားစု” ၏ အစည်းအဝေးတခုတွင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောခဲ့သည်။အစိုးရက လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြှင့်တင်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မူလကတည်းက လူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်၍ ဆင်းရဲ ကြပ် တည်းနေသော လူထုအတွက် ပို၍ ဆိုးရွားစွာ ဆင်းရဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်း မကြာမီ သြဂုတ်လတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူထုဆန္ဒပြပွဲများအတွက်စည်းရုံးလှုပ်ရှားကြရာတွင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အဖွဲ့က အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအားလုံး ချက်ချင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဦးတည်ချက်ပျောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ရဟန်းတော်များက လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများအတွက် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြပြီး လူထုပါဝင် လာစေသည့်လှုပ်ရှားမှုကြီးအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့သည်။ ရဟန်းတော်များက နိုင်ငံရေးအာဏာမမျှော်ကိုးဘဲ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားလာကြသောကြောင့်လည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ အသာစီးဘက်က ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံနှင့်မတူညီသောအချက်မှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လှုပ်ရှားမှုကြီးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်အများအပြား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ကြသော်လည်း ယခုလှုပ်ရှားမှုမှာ ခေါင်းဆောင်မဲ့၊ ပဲ့ထိန်းမဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ ခါးသီးဖွယ် လက်ခံရမည့် အမှန်တရားမှာ စစ်တပ်အတွင်း ညီညွတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ လူထုကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် ချေမှုန်းရန် စိတ်လိုလက်ရ ဆောင်ရွက်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အကြောင်းမရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်ဟု သဘောပေါက် သိမြင်သည့် နောက်မျိုးဆက် စစ်ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးဆိုသည်မှာလည်း မျှော်လင့်ရုံသက်သက်မျှသာ ဖြစ် နေသေးသည်။ ဤသို့ တောင်ပံအမိုးအောက်မှ ဖောက်ထွက်လာမည့် “မျိုးဆက် သွေးသစ်” စစ်ခေါင်းဆောင်များကို မမြင်ကြရသကဲ့သို့ စစ်တပ်အတွင်း သိသာသော အက်ကြောင်းများကိုလည်း မမြင်ကြရသေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အပြောင်း အလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လျှင်သော်မှ ရဟန်းတော်များ၏ ဆန္ဒပြပွဲများထက်စာလျှင် စစ်ခေါင်း ဆောင် မျိုးဆက်သစ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်သာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါတော့သည်။ အများဆုံးစွမ်းနိုင်မည်မှာ တချို့ စစ်ခေါင်းဆောင်များက လက်ရှိစစ်အစိုးရကို ဆက်လက်ထောက်ခံနေခြင်းဖြင့် သူတို့အတွက် အနာဂတ်မရှိနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက် သိမြင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဤအနေအထားဖြစ်လာစေရန်အတွက် အချိန်ကသာ စကားပြော လိမ့်မည် ဖြစ်ပါတော့သည်။ [Top]Far Eastern Economic Review မဂ္ဂဇင်းတွင် Bertil Lintner ရေးသားသည့် The Burmese Way to Fascism ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။ဘာတေး လင့်တ်နာသည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အကြီးတန်းသတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ်များ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ဧရာဝတီအင်တာနက်စာမျက်နှာမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်။အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။တချိန်က ဘိန်းရာဇာ ဟုကျော်ကြားခဲ့ပြီး အမေရိကန်အစိုးရက ဆုငွေ ဒေါ်လာ၂သန်း ထုတ်ခံထားရသော ဦးခွန် ဆာ (၇၃နှစ်)သည် ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်တွင် ယခုလ ၂၈ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ဦးခွန်ဆာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာ ဦးခွန်ဆိုင်းက ယခုလို အတည်ပြု ပြောသည်။“သူကရောဂါရှိတာကြာပြီ။ သွေးတိုးလည်းရှိတယ်ဗျာ။ ဆီးချိုလည်းရှိတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တခြမ်းသေတဲ့ ဟာလည်းရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ နှစ်ပေါင်း ၁၀ ကျော်ခံလာပြီးပြီဘဲ ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တာပေါ့။ရန်ကုန် ကအိမ်မှာပဲဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်။ဈာပနကို ၂ နာရီမှာမြောက်ဥက္ကလာပ ရေဝေးသုဿန် မှာသဂြိုင်္ဟ် မယ်လို့ ပြောတယ်။” ဦးခွန်ဆာကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် ဖာဖင့်ရွာတွင် ၁၉၃၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်က ကူမင်တပ်ခေါ် တရုပ်ဖြူတပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဦးခွန်ဆာသည် လွယ်မော် ကာကွယ်ရေးတပ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ကာ မြန်မာအစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်တွင် ရှမ်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးတပ် (အက်စ်ယူအေ) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်၊ ၁၉၈၅ခုတွင် စပ်မိုးဟိန်း.အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မော်ထိုင်းတပ်မတော်( အမ်တီအေ)ကိုဖွဲ့စည်း၍ ရှမ်းပြည်အရှေ ပိုင်းမှ ရှမ်းကယားနယ်စပ်အထိနယ်မြေများကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်၊ ထိုအချိန် တွင် ရွှေတြိဂံဒေသတွင် ဘိန်းထုတ် လုပ်မှုကြောင့် ဘိန်းရာဇာအဖြစ် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။၁၉၈၉တွင် အမေရိကန်ကို ဘိန်းတင်ပို့မှုကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရက ဖမ်းမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်အစိုး ရမှ ဆုငွေ ဒေါ်လာ ၂သန်းထုတ်ခဲ့သည့်နောက် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ဦးခွန်ဆာနှင့် သူ၏ တပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာအစိုး ရထံတွင် လက်နက်ချသွားခဲ့သည်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တွင် ဦးခွန်ဆာ ဦးဆောင်ခဲ့စဉ်အချိန်က နာမည်ပျက်ခဲ့သလို ကောင်းသော စွမ်းဆောင်ချက် များလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(တောင်ပိုင်း) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဝ်ဆိုင်းက ပြောသည်။“သူဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခေတ်မှာဆိုရင် တဖက်တလမ်းက နာမည်ဆိုးတွေရခဲ့သလို တဖက်တလမ်းကလည်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အတွက် သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ပျိုးထောင်ပေးတဲ့ သာဓက တွေရှိ ပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ရှမ်းလူငယ်တွေကို ပညာသင်ပေးတာတို့ စစ်ပညာသင်ပေးတာတို့ ကိုယ့် အမျိုးကိုချစ်တတ်အောင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်တတ်အောင် ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေခွဲခြားတတ်အောင် အဲ ဒါတွေကို သူကစပြီးတော့ ပျိုးထောင်သင်ကြားပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်”ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းသည် ဦးခွန်ဆာနှင့်မော်ထိုင်းတပ်မတော် လက်နက်ချသွားချိန်တွင်လိုက် ပါမသွား ဘဲ မြန်မာအစိုးရကို လက်နက်ကိုင်၍ ဆက်လက်တော်လှန်ခဲ့သည်။ဦးခွန်ဆာလက်နက်မချမီက ၄င်းဘိန်းထုတ်လုပ်ရခြင်းသည် ရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်း အတွက်လိုအပ်သောငွေထောက်ပံမည်သူရှိပါက ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သြစတြေးလျ သ တင်းဌာနတခုသို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။ဦးခွန်ဆာ၏ သမိုင်းကို ကမ္ဘာပြည်သူများနှင့် ရှမ်းပြည်သူများက ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးစိုင်း လောင်ဝ်ဆိုင်းက သုံးသပ်သည်။
သတင်း- mizzimaအာရှတလွှား အမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသူ တဦးဖြစ်သော ဘိန်းဘရင် ခွန်ဆာသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် ဘိန်းဘုရင်သည် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေခဲ့ရသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သူသည် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး အစိုးရကို တော်လှန် ပုန်ကန်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်သွားခဲ့သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံက အလိုရှိနေကာ ဖမ်းမိလျှင် ဆုငွေ နှစ်သန်းပေးမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားခံရသော်လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ အကာအကွယ်ဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ နေထိုင်ခဲ့သည်။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
“၀” ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကွယ်လွန်
အောင်မိုးမြင့်။အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။ “၀” အမျိုးးသားအဖွဲ့ချူပ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တာ့မဟာဆန်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ နခွန်း ဖင်း ဆေးရုံတွင် ယမန်နေ့ညက ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ယမန်နေ့ည သန်းခေါင်ကျော်အချိန်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန် ချိန်တွင် အသက် ၆၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဈာပန အခန်းအနားကို ယခုလတွင် တရုတ်ထုံးစံအရ မြေမြုပ်ခြင်း မပြုလုပ်သောကြောင့် လာမည့် နိုဝင် ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု သမီးဖြစ်သူကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ချင်းမိုင် ထောင်ကြီးမှတဆင့် နခွန်းဖင်း ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ နန်းကြာနုနှင့် သားသမီး လေးဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တာ့မဟာဆန်းသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ပန်ဆန်းမြို့မြောက်ဘက် ၀ိန်းငင်းမြို့၌ မွေးဖွားပြီး စော်ဘွား အဖ တာ့ဖောင်းနှင့် အမိ နန်းလူ တို့၏ သားဦးဖြစ်သည်။ တာ့မဟာဆန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် (၂၀) ခန့်မှစ၍ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်၍ “၀” ပြည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ခန့်မှစ၍ အဆုတ်နှင့် လေပြွန်ယောင် ရောဂါကို စတင်ခံစားခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ အသက်ရှူကြပ်သော ရောဂါကြောင့် မကြာခဏ အောက်ဆီဂျင်ပေးနေရသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် တာ့မဟာဆန်းအား ဘိန်းဘုရင် ဝေရှောက်ခမ်နှင့် ဆက်နွယ်နေမှု၊ မက်သာအက်ဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းနှင့်ချီ၍ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မှောင်ခို တင်သွင်းမှုတို့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင် တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ၄င်း၏နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ အ ကျဉ်းထောင်တွင် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ အကျဉ်းကျခံနေရသည်။ တာ့မဟာဆန်း ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်း “၀”အမျိုးသားတပ်မတော်ကို ဗိုလ်မှူးကြီး တာ့မိန်းမှ ဆက်လက် တာဝန်ယူထားသည်။NMG news
ဒီလက်မျိုး သားရေ …အဖေတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်သမိုင်းဒီတခါတော့ကမ်းကုန်အောင် ရိုင်းသွားခဲ့ပါပြီ …။သံဃာစင်ပါမှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘန်းစကားနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာတကယ်ကို ဖြစ်ခဲ့ပါရောလား …။တုတ်နဲ့ရိုက်တယ်လှံစွပ်နဲ့ထိုးတယ်မျက်ရည်ယိုဗုံးခွဲတယ်သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တယ် …။သြော် …လူမဆန်စွာ ရက်စက်သံဃာစင်ထက်ကိုပြေးတက်လာတဲ့ စစ်ဖိနပ်တွေမင်း … မြင်စေချင်လိုက်တာ … သားရယ် …။သားရေ …ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုသတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံအဆုံးနောက်ဆုံးသိလိုက်ရတဲ့သတင်းကတာမွေ အထက ၃ ရဲ့ရှေ့မှာအဖြူအစိမ်း ကျောင်းသားလေးရဲ့ဦးနှောဏ်တပိုင်းတစသမိုင်းက ရှာဖွေတွေ့ခဲ့ပြန်တယ် … ။သားရေ …မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုသံတွေနဲ့ညံစီနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအခုတော့နေ့ဆိုယမ်းနံ့ညဆိုသွေးနံ့တွေနဲ့ဆွမ်းလှူသူမလာရဲအောင်ရိုင်းပြနေတဲ့အဖြစ်ကမြန်မာသာမကကမ္ဘာကပါ ခြောက်ခြားခဲ့ရပါတယ် …။သားရေ …သာသနာမဲ့တော့မယ့်တိုင်းပြည်ကိုမင်းရင်မှာအလုပ်အကျွေးပြုအလှပဆုံးယုယမှုတွေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ တင်နေသမျှသမိုင်းကြွေးမင်း …ဆပ်ပေးစမ်းပါ သားရယ် …။ဒီလက်မျိုး(၂၁၊၁၀၊၂၀၀၇)နေ့တွင် (၇)လ ပြည့်သော သား လရောင် သို့ …ဆုံဆည်းရာမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။ ( မင်းကြီရဲ့ငြီးတွားသံ )
စစ်ခွေးတိုက်မှာ ပိုင်ဆိုင်သမျှစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အလုပ်ကလွဲလို့ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတဲ့ နေရာပါဗျာ။ မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရုံကလွဲလို့ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိ။ စကားပြောဖော် မရှိ။ မိခင်ဘာသာစကားတောင်မေ့သွားမှာစိုးလို့ စမ်းပြီးပြောပြော ကြည့်နေရတာ။ အီအီးပါလို့ကလည်း မဖြောင့် ရှူးရှူးပန်းလို့ကလည်း အဆင်မပြေ။ ဒန်ပန်းကန်ပြားသာသာ မိလ္လာခွက်ထဲ အီအီးရော ရှူရှူးရော ပါလည်းပါပန်းလည်းပန်း လုပ်ရတာကိုး။ အီးနှစ်တုံးလောက်ဆို ပေါက်ပြီးသား ရှူရှူးတွေက ဖင်ပြန် စင်နေပြီ။ ကိုယ့်ရှူရှူ ကိုယ်ရွံနေလို့ မဖြစ်ပါဖူးလေ လို့သာ သဘောပိုက်ရပါတော့တယ်။ ပါလိုက်ဦးဟ ပန်းလိုက်ဦးဟ။အီအီးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် မန်မန်ကျတော့လည်း တော်တော် အဆင်ပြေသား ခမျ။ စာထဲပေထဲမှာတော့ရောင်စုံသူပုန်ပဲ ကြားဖူးတာ၊ ခုတော့ ရောင်စုံထမင်း ဆိုတာ တွေ့နေပါပြီ။ အမယ် ဒါတောင် စိတ်မဆိုးနဲ့နော် စိတ်ဆိုးလို့များ ထမင်းလုံးနဲ့ ကောက်ပေါက်လိုက်ရင် နဖူးကွဲသွားမှာ ဘာမှတ်နေလဲ။ ကိုယ့်မှာက စားစရာဆိုလို့ ပါးစပ်တစ်ခုပဲ ပါတာဆိုတော့ ထောင်ကကျွေးတဲ့ ဟင်းပဲ အကောင်းအကန်း လုပ်စားရတာပ။မနက် ပဲဟင်းတဲ့။ ကိုယ်ပျောက်ပဲ။ လူကြီး အငိုတိတ်အောင် အရိပ်အရောင် မမြင်ရတဲ့ ပဲ ဆိုမှ ပဲဟင်းပါ ခမျ။ညနေကျတော့ တာလပေါ ဟင်း။ ထောင်စည်းရိုးနားမှာ သန့်ရှင်းရေး ကောင်းနေပုံရတယ်။ ဘာပင် ဘာရွက်မှန် မသိတဲ့ အလေ့ကျတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ တွေ့ရာအရွက် ထည့်လို့သာ ချက်ထားတဲ့ တာလပေါနဲ့ မကြာမျှောပြီးရင်ပဲ လာပကောလို့သာ ရေရွတ်လိုက်ပါတော့။ ဂွီဂွီဂွမ်ဂွမ် အသံတွေပေးလို့ လုပ်သားမောင် ၀မ်းနှုတ်ဆေး အမလေး အဘလေး တ သွားလောက်ပါရဲ့။ အိုဘယ့် တာလပေါ။ ကိုယ့်မှာသာ အစားခက် အပေါက်ခက် အပါခက် အနေခက်နေတာ အောင်မာ ထောင်ကျတွေကတော့ ပျော်လို့ဗျား။ ဇာဂနာ တည်းခိုနေရာ စစ်ခွေး နံဘေးက ကွက်လပ်ထဲမှာ မိန်းမ ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲနဲ့ ယောင်္ကျားဘောပွဲ လာလို့များတောင် ကျင်းပနေသေးရဲ့။ တရွှီးရွှီး တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ အာဆီယံမှာ အလံမလွှင့်နိုင်တဲ့ မြန်မာအသင်းတောင် မျက်ရည်ဘူးသီးလောက် ကျသွားလောက်ပါရဲ့။ မှောင်တဲ့အထိ ကန်နေလိုက်ကြတာ။အော် သူတို့တွေ ခမျာလည်း ဒီလိုမှမနေရင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ ထိုင်ငိုနေလို့မှ ထောင်က လွတ်မှာ မဟုတ်ပဲ လို့ တွေးပြီး မြန်မာ့အသံကလွှင့်တဲ့ ဘောပွဲလို အသံသာ နားထောင်ပြီး တနေကုန် လိုက်ရပါတော့တယ်။ ကိုင်း … နေ၀င်ပြီဆိုတာနဲ့ တပ်ထောင်ထာ ခြင်ထု အင်အားစုလို့ လာပြန်တော့ တို့တာဝန်အရေးရယ်ကြောင့် ခြင်နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်း စလိုက်ရပါတော့တယ်။ လိုက်သတ်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ ပုဆိုးနဲ့ ခါထုတ်ရတာပေါ့။ မရိုသေ့စကား အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဇာဂနာ ဖင်တုန်းလုံးလေးနဲ့ ခမျ။ ဟီဟိ ချစ်စရာလေး။ ဒီလို ခါထုတ်မှ မကိုက်ရတဲ့ ခြင်တွေခမျာ တဖြေးဖြေး တပ်ကွဲသွားပြီး ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားပါလေရော။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာဂနာ့ တစ်နေတာဟာ ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ သူများတကာ အိပ်ချိန်ရောက်ပြန်လဲ မအိပ်နိုင် နံရံမှီပြီး လုပ်စရာမရှိ ရေပဲသောက်လို့ ခြင်တပ်ကြီး မပျောက်မချင်း ထိုင်လို့သာ စောင့်နေရပါတော့တယ်။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
အောင်ဝေး (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မှသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထိ၁၃၀၀ပြည့် အရေးတော်ပုံ မှသည် ၂၀၀၇ (သြဂုတ်- စက်တင်ဘာ) ရွှေဝါရောင် အရေးတော်ပုံ အထိ၁၉၃၈- အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ကျောင်းသား ပေါင်းစည်းမှု မှသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၁၉၄၅- မတ်လတော်လှန်ရေး မှသည် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၁၉၆၂- ဇူလိုင် (၇)ရက် (ဆဲဗင်း ဂျူလိုင်) မှသည် တော်လှန်ရေးကောင်စီ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၆၃- ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှသည် တော်လှန်ရေးကောင်စီ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၇၄- ဇွန် (၆)ရက် အလုပ်သမား အရေးအခင်း မှသည် မဆလ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၇၄- ဒီဇင်ဘာ၊ ဦးသန့်အရေးအခင်း မှသည် မဆလ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၇၅- ဇွန်၊ ရွှေတိဂုံ အထွေထွေသပိတ် မှသည် မဆလ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၇၆- မှိုင်းရာပြည့် မှသည် မဆလ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၁၉၈၈- ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှု မှသည် မဆလ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၁၉၈၈- စက်တင်ဘာ (၁၈)၊ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းခံရခြင်း မှသည် န၀တ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၁၉၈၉- ဇူလိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိန်းသိမ်းခံရခြင်း မှသည် န၀တ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၁၉၉၀- အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခြင်း မှသည် န၀တ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၁၉၉၅- ဇူလိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခြင်း မှသည် န၀တ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၁၉၉၆- ကျောင်းသားအရေးအခင်း မှသည် န၀တ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၂၀၀၃- မေ(၃၀)၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံခံရမှု မှသည် နအဖ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၂၀၀၆- ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ အဖြူရောင် လှုပ်ရှားမှု မှသည် နအဖ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၂၀၀၇- သြဂုတ်- စက်တင်ဘာ၊ သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ ရွှေဝါရောင် သွေးစည်းမှု၊ အ၀ါရောင်သွေး တော်လှန်ရေး မှသည် နအဖ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးလွတ်လပ်ရေး …ဒီမိုကရေစီရေး …ငြိမ်းချမ်းရေး …တရားမျှတရေး …လူ့အခွင့်အရေး …ညီညွတ်ရေး …အရေးတော်ပုံပေါင်းထောင်သောင်းမကမြောက်မြားလှစွာသမိုင်းစာမျက်နှာမှာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်“ဗကသ” ဆိုတာAll Burma Federation of Student Unions“ABFSU” ဆိုတာရာဇ၀င် ပြောင်မြောက်မကြောက် သတ္တိနီဘိရဲရဲခွပ်ဒေါင်း အသည်းနဲ့ဖိနှိပ်သူ မှန်သမျှစစ်အာဏာရှင် မှန်သမျှအမြဲတော်လှန် ဖြုတ်ချတဲ့အာဂ အင်အားစု ကျောင်းသားထုရဲ့တိုင်းပြုပြည်ပြုဦးဆောင်မှု အလံတော်ပဲ။ဒီအလံတော်ကိုမြစ်ဧရာပေါ်မှာကျဆုံးသူများရဲ့ အုတ်ဂူပေါ်မှာလူထုရဲ့ ရင်ပြင်တော်မှာပြည်သူ့တပ်ဦးမှာမြူးမြူးကြွားကြွားငွားငွားစွင့်စွင့်ဒါ့ထက်ပိုပြီး ရဲရဲရင့်ရင့်မြင့်မြင့်မားမား လွှင့်ထူကြရမယ်။“မြင်းခွာ တချက်ပေါက်ရင်ဗမာတပြည်လုံးမီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေရမယ်” ဆိုတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဗဟိန်း မှသည် …“ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးအတွက်အရိုးတွေ တောင်လိုပုံမှ ရမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အရိုးကဟိုး အောက်ဆုံးမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် မှသည် …၂၀၀၈ ငါတို့ခေတ်နှင့် အပြိုင်ရင်ဆိုင် ချီတက်မျိုးဆက်သစ် အရေးတော်ပုံရွှေတိဂုံ သပိတ်စခန်း မှသည်နေပြည်တော် သိမ်းပိုက်ရေးအထိသွေးမော်ကွန်းဟောင်း၊ လမ်းသစ်ကြောင်းမှာခွပ်ဒေါင်း အလံတော်၊ တိုက်ပွဲခေါ်(ဒါဟာ …)ကျော်ကိုကိုတို့ခေတ်ရဲ့ဗကသ အောင်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာ …ကျော်ကိုကိုတို့ခေတ်ရဲ့“ဗကသ”မဟာ အောင်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ ။အောင်ဝေး (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)(၁၄-၁၀-၀၇)(မျိုးဆက်သစ် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ရာဟု(ခ)ကျော်ကိုကို အဖမ်းမခံရဘဲ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားသည့် သတင်းကို ကြားရပြီးနောက် ဤကဗျာကို ရေးပါသည်)ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလောဂ့်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းAdkvfatmif}uD;wa,muf ArmjynfEdkifiHa&;rSm t±H_;udktodtrSwfðy+yD; tm;vHk;udkausmcdkif;oGm;wm 16ESpfavmuf±Sd yg+yD? ol@EdkifiHa&;tqifhae&m r&Sdawmhbl;qdkwmudk trsm;ua&m/ oludk,fwdkifua&mtodtrSwfðy+yD; óu;0dkif;xJudk rsufESmokwf yk0gtjzLypfcswmeJ@ Zmwfodrf;oGm;cJhwmyg? (ol@pum;eJ@qdk&if trwfae&m 250ta±G;cH&mrSm wae&myJta±G;cH&vdk@ jzpf ygw,f?) 'gayrJhtckawmh oljyef+yD;yGJxGufvmygw,f? Adef;armif;eJ@r[kwfyg/ c|wfeif;av;eJ@qdk&if ydkrSefrvm; rodyg? 'gayrJh rsufESmajymifajymifeJ@jzpfygw,f? bmoabmvJ? 'Dae@EdkifiHa&; tajctaerSm ol@tcef;bmrsm;±Sdao;vdk@vJ? jynfol@bufu oluzdk@ tcef;r±Sdawmhygbl;? 'Dae@umvrSmol@&J@ toHk;0ifr_[m ppftpdk;&twGufom jzpfygw,f? 'g[mvnf; 'DcsKyf&J@xdyfwef; acgif;aqmifawGjzpfwJh Adkvfatmifa&$/ AdkvfwifOD;/ a':atmif qef;pk=unf/ AdkvfvGifpolawGudk EdkifiHa&;t& xkd;ESufzdk@uvGJvdk@ wjcm;bmrSrjzpfEdkifygbl;?Adkfvfatmif}uD;[m Adkvfatmifa&$/ AdkvfwifOD;/ AdkvfvGifpolwdk@udk ‘uGefjrLepf’vdk@awmh rpGyfpGJygbl;? pGyfpGJvdk@&Sd&ifvnf; olyJvl&Dp&myJjzpfrSmyg? 'ga=umifh ‘ae&m&csifwJh tacsmiform;awG’ vdk@yJ pGyfpGJvdkufygw,f? olajymyHku yufpuf=urf;wrf; ygw,f? oduQm±SdwJhEdkifiHa&;orm;eJ@rwlygbl;? “wyfrª;}uD;awGu Adkvfatmif}uD;eJ@aygif;&ifawmh olwdk@ae&m&rSmr[kwfbl;? rpkeJ@aygif;rS&r,f”qdk+yD; ol@udk 'DcsKyfxJ uae uefxkwfwmyJvdk@ ajymvdkufwmyg? Adkvfatmif}uD;wa,muf etz'Drdkua&pDudk aumif;aumif;}uD;cHpm;oHk;pGJaeyHkjzpf ygw,f? oHCmawmfawGeJ@ ausmif;om;awG&J@v_yf&Sm;r_}uD;udk ta=umif;ðy+yD; etz u 'DcsKyfacgif;aqmifawGudk xdk;ESuf zdESdyfaecsdefrSm Adkvfatmif}uD; wpcef;xvmwm[m oabm±dk;r[kwwm±Sif;aeygw,f? anmifESpfyift+yD;/ olwdk@&J@zGJ@pnf;yHk a&;qGJa&;eJ@twl 'DcsKyfudk acsr_ef;a&;rSm wwyfwtm; jznfhvmwmjzpfygw,f? jznfhw,fqkdwmrSm oluol@qENeJ@ol xGufvm wmqdk&ifrSm;ygr,f? etzu xGufckdif;vdk@/ ol@tóuufawG@+yD; 'l;uav;AHkaxmifwD;xGufvmwmyg? ol@[meJ@olaysmfvdk@? oltif rwef0goemygwJh udk,f&nfaoG;wmvnf; vkyfcGifh&awmhr,fav? ol[m AdkvfcsKyfatmifqef;/ Adkvfae0if;wdk@eJ@wwef;wnf; jzpfw,fqdkwmudk ol@ypyfuxGufwJh taxmuftxm;awGeJ@ ajymawmhwmyJr[kwfvm;?wu,fawmh Adkvfatmif}uD;ta=umif;/ ol@ordkif;udkajym&r,fqdk&if ol[m usOf;xJusyfxJ aμfwdkif; udk,fh tcsif;csif;tay: opPmazmufavh±Sdw,f? ae&m0if,lwwfw,fqdkwmu p&rSmyg? (1958 tm%modrf;yGJ/ 1962 tm%m odrf;yGJeJ@ 1988 u ‘tm%mvufv$J,l’yGJrSm Adkvfatmif}uD; bmvkyfcJhovJqdkwmawGudk =unfhyg?) zqyvawG 1960ckESpfa±G; aumufyGJrSm t±H_;}uD;±H_;awmh Adkvfae0if;u ol@tzdk@ qdk±S,fvpfppfAdkvfawGeJ@vrf;cGJrS ol@a±S@a&;aumif;r,f/ 'ga=umihfrdk@ wyfxJrSm±SdwJh usefqdk±S,fvpfawGeJ@vJ anmifndKyifpceff;rSm uwWDygvrf;cGJ cGJawmhr,fvdk@ qHk;jzwf+yD; Adkvfarmifarmif/ Adkvf=unf0if;polawGudk z,f±Sm;wJhcJhygw,f? 'gayrJh tJ'Dtpk&J@xdyfoD;wa,mufjzpfwJh Adkvfatmif}uD;/ 1958ckESpfrSm tm%modrf;+yDjzpfa=umif; AdkvfarmifarmifeJ@twl OD;EktdrfudkoGm;+yD;ta=umif;=um;cJhwJh Adkvfatmif}uD;[m Adkfvfarmifarmifwdk@eJ@ ðywfroGm;yJ bma=umihf Adkvfae0if;tyg;rSm usefae&pfwmvJqdkwm pOf;pm;p&maumif;ygw,f? Adkvfae0if;u ol'kwd,t}udrf tm%mrodrf;rDav;wifjzpfwJh 1962ckESpf az azmf0g&Dv 18&ufrSm wyfrª;}uD;rsm;tpnf;ta0;ac:+yD; qdk±S,fvpfwyfrª;}uD; 13OD;udk xkwfypfcJhwmjzpfygw,f?Adkvfae0if;raorD ±Spfav;vHk; umvwkef;u Adkvfae0if;eJ@ywfoufvdk@/ rqvygwDeJ@ywfoufvdk@ olbmajymcJhzl;vdk@vJ? tck Adkvfae0if;r±SdawmhrS Adkvfae0if;udk opPmazmufjyaeygw,f? 'ghtjyif tckqdk&if ol[m 'DcsKyfacgif;aqmifawGudk opPm azmufjyefyg+yD? a':atmifqef;pk=unfu tcsKyfcHae&csdef/ 'DcsKyfacgif;aqmifawG tzrf;cHae&csdefrSmrS xGuf+yD;ajymvmwmyg?aemufausmudk"m;eJ@xdk;wmxuf qdk;ygw,f? “&efukefu uav;awGudk e,fpyfv$wfvdkufw,f? tckvufrSwfeJ@awmcdkwJh oabmaygh”vdk@ ajymaewm[m a':atmifqef;pk=unfudk acsmufwGef;aewmyJ jzpfygw,f?? Adkvfatmif}uD;[m 'DvdkyJ tqif; bD;wyfavh±Sdolyg? ol@EdkifiHa&; b0wav#mufvHk; tJ'DvdkyJ vkyfcJhw,fqdkwJhordkif;&Sdygw,f? olArmjynfqdk&S,fvpfygwD (Aqy)&J@ wGJbuftaxGaxG twGif;a&;rª; ae&m&atmifvkyfcJhyHkeJ@ 48 jynfwGif;ppfjzpfatmif vkyfcJhyHkawGudk aemiftvsOf;oifh&if a&;yg OD;r,f?)ol[m ‘Adkvfae0if;wynfh b,fwkef;urSrjzpfcJhbl;’vdk@ Adkvfatmif}uD;uajymygw,f? [kwf&J@vm;? “wynfh rjzpf cJhbl;? wynfhcHcJhwmyJ” vdk@ ajymcsifwm jzpfygvdrfhr,f? “olvnf;pma&; udk,fvnf;pma&;”vdk@vnf; wef;wloli,fcsif;csif; ozG,f ajymvkdufygao;w,f? vlrSefor# arG;vm=uwkef;uawmh ‘ykckef;vuf (2) vHk;/ z0g;vuf (2) opf’ eJ@csnf;yg? 'gayrJh tm;vHk; rSwfrdwJh ±Spfav;vHk;jzpfumeD;rSm Adkvfae0if;qDudkola&;cJhwJh “AdkvfcsKyfcifAsm;-”qdkwJh pmawGudkjyefpOf;pm;vdkufyg? wyftjyifudk aμf/ tm%mt0ef;t0dkif;tjyifudk aμfaeμae olvSrf;zm;yHkawG[m ykcHk;csif;zuf}uD;vmolawG/ rif;-ig ajymaeolawG a&;yHkeJ@wlyg&J@vm;?Adkvfatmif}uD;wa,muf b,fwkef;ursm; Adkvfae0if;&J@ txufu Adkvfatmif}uD;aecJhzl;vdk@vJ? Adkvfatmif}uD; aoaocsmcsmpOf;pm;ygOD;?ArmjynfpmayavmurSm xl;xl;jcm;jcm;emrnfxGufwJh jrwfcdkifudk,fwdkif tifwmAsL;vkyfxm;wJh v#yfwpfjyuf *sme,fxJu Adkvfatmif}uD;&J@ ajym=um;csufawGxJrSm olu ol&J@touf(80) jynfharG;ae@udpPudkvnf; ajymaeygao;w,f? ol@pum;u tJ'DrSmxyfcsJjytkef;r,f/ apmifh=unhfqdkwJh t"dy`m,fxGufovdkvdkygyJ? t"du[m 'DcsKyf&J@vuf&Sdacgif;aqmif}uD;awG (wyfrª;}uD;awG)udk tykwfcscsifwmyJ? tJ'Dacgif;aqmifawG ajymr&qdkr&jzpfaecsdefrSm Adkvfatmif}uD;vufpm;acsrvdk@ jyifaewmyg? wu,fawmh 'DcsKyf A[dk&J@ OuUXrSefor#[m wyfrª;}uD;awGcsnf;r[kwfygvm;?tck Adkvfatmif}uD; yGJxGufvmwm[m -(u) wyfrª;}uD;awGudk xdk;ESuftykwfcszdk@(c) a':atmifqef;pk=unfudk pGJcsufwifzdk@ (Adkvfatmifqef;udk ocifxGef;tkyfvkyfcJhovdk) jzpfw,f?(*) wjcm; aomif;ajymif;awGvmawGuawmh ol@xHk;pHtwdkif; igod - igwwf vlwGifus,f vkyfcsifwmyg? wul;wu rSwfcsufay;p&mrvdkygbl;? “tvH±ª;eJ@ zJoHk;csyform; avyef;jywm”vdk@yJ oabmxm;vdkufygw,f? Adkvfae0if;eJ@ Adkvfatmif}uD; qufqHa&;udkawmh atmufusrS &Sif;=uygvdk@yJ ajymvdkufcsifygw,f?(1) ed*Hk;csKyf&&if etz[m EdkifiHa&;rSm cHppfaojzpfaeyg+yD? 'ga=umifh EdkifiHa&;oHacs;wufaewJh "m;udkvnf; aumufudkif ae&ygw,f?(2) ol[m olraocifrSm oleJ@Adkvfae0if;wdk@ yEMufcswnfaqmufcJh=uwJh ppftm%m±Sifpepfudk aoumeD;rSm tvkyf tau|;ðy/ umuG,fzdk@twGuf yGJxGufvmwmomjzpfygw,f? 'Drdkua&pDpepfumuG,fa&;twGuf vHk;0r[kwfygbl;? ol[m tvGef±Sd&if ±Spfav;vHk;wkef;uajymwJh ppfwyfudkpdwfeJ@awmifrSrjypfrSm;=ueJ@ qdkwmrsdK;eJ@ ppftkyfpkudkumuG,fwJh Zmwdudk b,fawmhrS rpGef@ygbl;?(3) etz[m olwdk@&J@vrf;jyajryHk a±Sma±Sm±ª±ª+yD;oGm;&if Adkvfatmif}uD;udk ae&may;tkef;rvm; apmihf=unhf&atmifyg?ol'Dae@bmawGyJajymaeae/ jynfolvlxk[m olypyf[vdkufw,fqdkwmeJ@ tukeftqHk;txd jrif+yD;om;yg? prlqm qdkwmxufydkqdk;wJh bGJ@udkr&cifjrefjref tdrfjyefygvdk@om t}uHðyvkdufcsifygw,f?&Jabmfzdk;oHacsmif;ဆုံဆည်းရာမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ရဲဘော်ကြီး ဇာဂနာနဲ့ ရဲဘော်ကြီး ကျော်သူ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
အောင်ဝေး (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)ကိုဇာဂနာနဲ့ ကိုကျော်သူတို့ရေ ….ခင်ဗျားတို့ အဖမ်းခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်က အခုအချိန်အထိ ရှောင်တိမ်း လွတ်မြောက်နေခဲ့တယ်။ အပြစ်မရှိ တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို နအဖစစ်အုပ်စုက ကြာကြာ ဖမ်းထားရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက် မကြာခင်မှာ ပြန် လွတ်မှာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့အနားမှာ ကျနော် ရှိမနေနိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မပြီးသေးတဲ့ တိုက်ပွဲအ တွက် ကျနော့်ရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ ကျနော် (နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားပြီး) ပေးနေမှာပါပဲ။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက် ပြန်လွတ်လာရင် လေ့လာဖတ်ရှုပြီး တိုက်ပွဲကို ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျနော် ပုန်းအောင်း ပြေးလွှားရင်း ရေးထားတဲ့ စာတမ်းကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာတမ်းက ကျနော် အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာတမ်းပါ (ကူညီ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် သူတွေက မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့)။အထူးသဖြင့် ကိုကျော်သူကို ပြောချင်တယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ မကြောက်ပါနဲ့။ ကြောက်နေရင် တပန်းရှုံးတယ်။ မရွှေဇီးကွက် အနားမှာ ရှိတယ်။ ဒါ ကိုကျော်သူရဲ့ သစ္စာအရှိဆုံး ရဲဘော်ပဲ။ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျတဲ့အထိ ဆက် လက် တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ ကျနော်တို့ ရဲသုံးဖော် တိုက်ပွဲမဆုံးမချင်း လက်တွဲမဖြုတ်စတမ်း။ဟောဒီမှာ ကျနော့်ရဲ့ အကြံပေး စာတမ်း …။မြန်မာ့ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကျနော်တို့ လူထုဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်များအားလုံး ကျနော်တို့ရဲ့ “ရွှေဝါရောင် သွေးစည်းညီညွတ်မှု (saffron solidarity)၊ အ၀ါရောင်သွေး တော်လှန်ရေး (Yellow Blood Revolution)” ရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ အားသွန်ကြိုးပမ်း ကြပါစို့။ကျနော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု တိုက်ပွဲစဉ်ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းသုံးသွယ်နဲ့ ဆက်လက် သယ်ဆောင် သွားရမယ်။ နည်းလမ်းတွေကတော့ …(၁) စစ်ရေးနည်း(၂) သံတမန်ရေးနည်း(၃) တန်ပြန် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးနည်း တွေပါပဲ။(၁) စစ်ရေးနည်းကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရဲ့ စိတ်ရင်းဟာ စစ်တပ်နဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကြားမှာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ချင်တာပါ။ကျနော်တို့ဟာ တပ်မတော်သားတွေအပေါ်မှာ နားလည်ပေးရမယ်။ စစ်သားတွေကို ကျနော်တို့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း ကြရမယ်။ စစ်သားတွေကို သံဃာတွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေကို ကယ်တင်ဖို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းကြ ရမယ်။ကျနော်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် “တတိယနဲ့ နောက်ဆုံး”တော်လှန်ရေးကို စစ်သားတွေ ဦးဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။ အဲဒီလို ဦးဆောင်မယ့် တပ်မ တော်သားတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တော်လှန်တဲ့ အင်အားစုတွေ မကြာခင် ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာပါပဲ။ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲသမိုင်းမှာ ဒါဟာ Soldiers-led စစ်သားတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ၂၀၀၇ (သို့) ၂၀၀၈ … တတိယနဲ့ နောက်ဆုံး တော်လှန်ရေးပဲ။ အရင် တော်လှန်ရေး နှစ်ရပ်ကတော့ Students-led ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းနဲ့ သံဃာတွေ ဦးဆောင်တဲ့ အခု Sanghas-led ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အရေးတော်ပုံတို့ပါ။ကျနော်တို့ဟာ “သားသုံးသား” ပေါင်းစည်းရေးကို အားကိုး မျှော်လင့်ကြရမယ်။ ကျောင်းသား (ဗကသနဲ့ ၈၈မျိုး ဆက်)၊ စစ်သား (တပ်မတော်သား)၊ ဘုရားသား (သံဃာ) အဲဒီ “သားသုံးသား” ပေါင်းစည်းအောင် ကြိုးပမ်းရင်း မ ကြာခင်မှာ “တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုကြီး”တခု မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာကိုလည်း ကျနော်တို့ ယုံကြည် မျှော်လင့် ထားရမယ်။ဒါ ပထမဆုံး စစ်ရေးနည်းပါ။(၂) သံတမန်ရေးနည်းဒီနည်းကတော့ တရုတ်အစိုးရ၊ ရုရှားအစိုးရနဲ့ အိန္ဒိယအစိုးရတွေနဲ့ အဓိက သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီအစိုးရသုံးရပ်ဟာ လက်ငင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲအပေါ်မှာ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေကြတယ်။ ဒါဟာ နအဖစစ်အုပ်စုကို ထောက်ခံနေတဲ့ သဘောပဲ။ဒါပေမယ့် ဒီအစိုးရတွေနဲ့ သူတို့ပြည်သူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သဘောထားရာမှာ မတူကွဲပြားတာကိုတော့ သတိပြုရမယ်။ဒီအစိုးရတွေဟာ နအဖကို အစဉ်အမြဲ ကျောထောက်နောက်ခံ မြှောက်ပေးနေသူတွေပဲ။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဒီအစိုးရတွေက ကျားကန်ပေးထားတယ်။ကျနော်တို့ဟာ သံခင်းတမန်ခင်းနည်းနဲ့ သူတို့ပြည်သူတွေက သူတို့အစိုးရတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ထောက်ပံပေးနေတာကို ရှုတ်ချပြီး ချက်ချင်းပဲ ဒီအကူအညီတွေ ရပ်ဆိုင်းပစ်စေဖို့ တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်သွား ကြရလိမ့်မယ်။(၃) တန်ပြန် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးနည်းဒီနည်းမှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ Psych-war ကို Psych-war နည်းနဲ့ပဲ တန်ပြန်တိုက် ခိုက်ကြရမယ်။စစ်အစိုးရ လော်စပီကာ သတင်းစာတွေရဲ့ အတင်းအဖျင်း ၀ါဒဖြန့် အရေးအသားတွေကို ကျနော်တို့ ဝေဖန်ပစ်ရ မယ်။ အစိုးရပေါ်လစီကို ထင်ဟပ်တဲ့ မီဒီယာနဲ့ စစ်အုပ်စုလိုလားတဲ့ စာပေအနုပညာတွေကို ကျနော်တို့ တုန့်ပြန် ပစ်ရမယ်။ ရန်သူရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ယန္တရားကို ကျနော်တို့ ထိုးနှက်ပစ်ရမယ်။ မြောင်းထဲရောက်သွားအောင် မောင်း ထုတ်ပစ်ရမယ်။ နောက်ဆုံးမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လှုပ်ရှားမှုဟာ အကျပ်အတည်းဆိုက်ပြီး ပြိုကွဲသွားစေ ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အရေးအကြီးဆုံး အချက်တခုကတော့ မြို့နယ်အလိုက် ကြံ့ဖွတ်အမှု ဆောင်တွေ၊ စွမ်းအားရှင် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတွေကို အတိအကျ အသေးစိတ် ရေး သား မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ပါပဲ။ (နောင်တချိန် တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲဆင်တဲ့အခါမှာ တရားမျှတမှုအတွက် သူတို့ ကို တရားခုံရုံး တင်တဲ့အခါ လူမှားပြီး သတ်မိတာမျိုး၊ စီရင်ချက်ချတာမျိုး မဖြစ်စေရအောင်လို့ပါ။)ဒီနည်းဟာ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျဖို့ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ တော်လှန်သော အနုပညာပဲ။ စစ်အစိုးရကို ကိစ္စတုံး အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းသွားစေမယ့် တန်ပြန် အနုပညာပဲ။ဒါပါပဲ။ မြစ်ဧရာပေါ်မှာ လွတ်လပ်မှုဟာ အပြင်းအထန် စီးဆင်းလာပါစေတော့ …။အောင်ဝေး (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)(၁၁-၁၀-၀၇)ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
စစ်အစိုးရ အရာရှိနှင့် တွေဆုံရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်မှ ထွက်ခွာ
အေအက်ဖ်ပီ (၂၅-၁၀-၀၇)အထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အတိုက်အခံများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် စစ်အုပ်စုက ခန့်အပ်ထားခဲ့သည့် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိဟု ယုံကြည်ရသော ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကြာသပတေးနေ့တွင် နေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း အရာရှိတဦးက ပြောကြားသည်။“နေ့ခင်း ၂နာရီလောက်မှာ နေအိမ်ကနေ သူမ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာမှာ အလုပ်သမားဝန်းကြီးနဲ့ တွေ့ဖို့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်”ဟု နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်ထားခဲ့သည့် ဦးအောင်ကြည်ကို ရည်ညွှန်းပြီး အဆိုပါ အရာရှိက ပြောကြားသည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၈နှစ်အတွင်း အကျယ်ချုပ်နှင့် ၁၂နှစ်ကျော်ကြာ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီနှင့် တပ်မတော် ဧည့်ဂေဟာ၌ တွေ့ဆုံရန် အင်းလျားကန်ဘေးရှိ နေအိမ်မှ နောက်ဆုံးထွက်ခွာခဲ့သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် စစ်အုပ်စုက အဆိုပြုသည့် အရာရှိတဦးကို မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက ထောက်ခံကြိုဆိုပြီးနောက် သူမနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဦးအောင်ကြည်ကို ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦး အောင်ကြည်တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်နေ့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလောဂ်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Full List of Australian sanctions against Burma.ID CODESANCTION REFERENCE NAME DETAILS SUB-GROUP 2007BUR0001 BUR Shwe SENIOR GENERAL THAN SHWE, Chairman - DOB. 02.02.1933 State Peace and Development Council 2007BUR0002 BUR Kyaing KYAING KYAING, Wife of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0003 BUR Shwe THANDAR SHWE, Daughter of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0004 BUR Win MAJOR ZAW PHYO WIN, Husband of Thandar Shwe, Deputy Director Export Section, Ministry of Trade State Peace and Development Council 2007BUR0005 BUR Shwe KHIN PYONE SHWE, Daughter of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0006 BUR Shwe AYE AYE THIT SHWE, Daughter of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0007 BUR Shwe TUN NAING SHWE a.k.a. TUN TUN NAING, Son of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0008 BUR Thanda KHIN THANDA, Wife of Tun Naing Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0009 BUR Shwe KYAING SAN SHWE a.k.a. SYAING SAN SHWE, Son of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0010 BUR Sein DR KHIN WIN SEIN, Wife of Kyaing San Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0011 BUR Shwe THANT ZAW SHWE a.k.a. MAUNG MAUNG, Son of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0012 BUR Shwe DEWAR SHWE, Daughter of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0013 BUR Shwe KYI KYI SHWE, Daughter of Senior General Than Shwe State Peace and Development Council 2007BUR0014 BUR Aye VICE-SENIOR GENERAL MAUNG AYE, Vice-Chairman - DOB. 25.12.1937 State Peace and Development Council 2007BUR0015 BUR San MYA MYA SAN, Wife of Vice-Senior General Maung Aye State Peace and Development Council 2007BUR0016 BUR Aye NANDAR AYE, Daughter of Vice-Senior General Maung Aye, spouse of Major Pyi Aung State Peace and Development Council 2007BUR0017 BUR Mann GENERAL (THURA) SHWE MANN, Chief of Staff, Coordinator of Special Operations (Army, Navy and Air Force) - DOB 11.07.1947 State Peace and Development Council 2007BUR0018 BUR Thet KHIN LAY THET, Wife of General Thura Shwe Mann - DOB. 19.06.47 State Peace and Development Council 2007BUR0019 BUR Mann AUNG THET MANN a.k.a SHWE MANN KO KO, Son of General Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company - DOB 19.06.1977 State Peace and Development Council 2007BUR0020 BUR Thandar KHIN HNIN THANDAR, Wife of Aung Thet Mann State Peace and Development Council 2007BUR0021 BUR Mann TOE NAING MANN, Son of Aung Thet Mann - DOB 29.06.1978 State Peace and Development Council 2007BUR0022 BUR Latt ZAY ZIN LATT, Wife of Toe Naing Mann; Daughter of Khin Shwe - DOB. 24.03.1981 State Peace and Development Council 2007BUR0023 BUR Win GEN SOE WIN, Prime Minister since 19.10.2004 - DOB. 10.5.1947 State Peace and Development Council 2007BUR0024 BUR Nwe THAN THAN NWE, Wife of Gen Soe Win State Peace and Development Council 2007BUR0025 BUR Sein LT-GEN THEIN SEIN, Secretary 1 (since 19.10.2004) & Adjutant General - DOB. 20.4.1945 State Peace and Development Council 2007BUR0026 BUR Win KHIN KHIN WIN, Wife of Lt-Gen Thein Sein State Peace and Development Council 2007BUR0027 BUR Oo LT-GEN (THIHA THURA) TIN AUNG MYINT OO, Quartermaster-General State Peace and Development Council 2007BUR0028 BUR Hnin KHIN SAW HNIN, Wife of Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo State Peace and Development Council 2007BUR0029 BUR Win LT-GEN KYAW WIN, Chief of Bureau of Special Operations2(Kayah State) - DOB. 3.1.1944 State Peace and Development Council 2007BUR0030 BUR Yee SAN SAN YEE a.k.a SAN SAN YI, Wife of Lt-Gen Kyaw Win State Peace and Development Council 2007BUR0031 BUR Aung NYI NYI AUNG, Son of Lt-Gen Kyaw Win State Peace and Development Council 2007BUR0032 BUR Win SAN THIDA WIN, Wife of Nyi Nyi Aung State Peace and Development Council 2007BUR0033 BUR Win MIN NAY KYAW WIN, Son of Lt-Gen Kyaw Win State Peace and Development Council 2007BUR0034 BUR Htun DR PHONE MYINT HTUN, Son of Lt-Gen Kyaw Win State Peace and Development Council 2007BUR0035 BUR Win SAN SABAI WIN, Wife of Dr Phone Myint Htun State Peace and Development Council 2007BUR0036 BUR Aye LT-GEN TIN AYE, Chief of Military Ordnance, Head of UMEH State Peace and Development Council 2007BUR0037 BUR Ohn KYI KYI OHN, Wife of Lt-Gen Tin Aye State Peace and Development Council 2007BUR0038 BUR Aye ZAW MIN AYE, Son of Lt-Gen Tin Aye State Peace and Development Council 2007BUR0039 BUR Myint LT-GEN YE MYINT, Chief of Bureau of Special Operations 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) -DOB. 21.10.1943 State Peace and Development Council 2007BUR0040 BUR Myint TIN LIN MYINT, Wife of Lt-Gen Ye Myint, - DOB. 25.1.1947 State Peace and Development Council 2007BUR0041 BUR Myint THEINGI YE MYINT, Daughter of Lt-Gen Ye Myint State Peace and Development Council 2007BUR0042 BUR Myint AUNG ZAW YE MYINT, Son of Lt-Gen Ye Myint, Yetagun Construction Co State Peace and Development Council 2007BUR0043 BUR Myint KAY KHAING YE MYINT, Daughter of Lt-Gen Ye Myint State Peace and Development Council 2007BUR0044 BUR Htwe LT-GEN AUNG HTWE, Chief of Armed Forces Training - DOB. 1.2.1943 State Peace and Development Council 2007BUR0045 BUR Wai KHIN HNIN WAI, Wife of Lt-Gen Aung Htwe State Peace and Development Council 2007BUR0046 BUR Than LT-GEN KHIN MAUNG THAN, Chief of Bureau of Special Operations3(Pegu, Irrawaddy, Ara.k.an) State Peace and Development Council 2007BUR0047 BUR Tint MARLAR TINT, Wife of Lt-Gen Khin Maung Than State Peace and Development Council 2007BUR0048 BUR Bo LT-GEN MAUNG BO, Chief of Bureau of Special Operations4(Karen, Mon, Tenasserim) - DOB. 16.2.1945 State Peace and Development Council 2007BUR0049 BUR Myint KHIN LAY MYINT, Wife of Lt-Gen Maung Bo State Peace and Development Council 2007BUR0050 BUR Myint KYAW SWA MYINT, Son of Lt-Gen Maung Bo State Peace and Development Council 2007BUR0051 BUR Win MAJ-GEN HLA HTAY WIN, Rangoon (Yangon) Regional commanders 2007BUR0052 BUR Wai MAR MAR WAI, Wife of Maj-Gen Hla Htay Win Regional commanders 2007BUR0053 BUR Aye BRIG-GEN THAUNG AYE, Eastern (Shan State (South)) Regional commanders 2007BUR0054 BUR Aung THIN MYO MYO AUNG, Wife of Brig-Gen Thaung Aye Regional commanders 2007BUR0055 BUR Aye MAJ-GEN THAR AYE a.k.a. THA AYE, North Western (Sagaing Division) Regional commanders 2007BUR0056 BUR Khaing WAI WAI KHAING a.k.a. WEI WEI KHAING, Wife of Maj-Gen Thar Aye Regional commanders 2007BUR0057 BUR Oo BRIG-GEN KHIN ZAW OO, Coastal (Tanintharyi Division) Regional commanders 2007BUR0058 BUR Htut BRIG-GEN AUNG THAN HTUT, North Eastern (Shan State(North)) Regional commanders 2007BUR0059 BUR Zaw MAJ-GEN KHIN ZAW, Central (Mandalay Division) Regional commanders 2007BUR0060 BUR Win KHIN PYONE WIN, Wife of Maj-Gen Khin Zaw Regional commanders 2007BUR0061 BUR Zaw KYI THA KHIN ZAW, Son of Maj-Gen Khin Zaw Regional commanders 2007BUR0062 BUR Zaw SU KHIN ZAW, Daughter of Maj-Gen Khin Zaw Regional commanders 2007BUR0063 BUR Shein MAJ-GEN MAUNG SHEIN, Western (Rakhine State) Regional commanders 2007BUR0064 BUR Aung MAJ-GEN (THURA) MYINT AUNG, South Western (Irrawaddy Division) Regional commanders 2007BUR0065 BUR Nwe THAN THAN NWE, Wife of Maj-Gen Thura Myint Aung Regional commanders 2007BUR0066 BUR Myint MAJ-GEN OHN MYINT, North (Kachin State) Regional commanders 2007BUR0067 BUR Swe NU NU SWE, Wife of Maj-Gen Ohn Myint Regional commanders 2007BUR0068 BUR Thiha KYAW THIHA, Son of Maj-Gen Ohn Myint Regional commanders 2007BUR0069 BUR Zin NWE EI EI ZIN, Wife of Kyaw Thiha Regional commanders 2007BUR0070 BUR Ko MAJ-GEN KO KO, South (Bago Division) Regional commanders 2007BUR0071 BUR Sum SAO NWAN KHUN SUM, Wife of Maj-Gen Ko Ko Regional commanders 2007BUR0072 BUR Win BRIG-GEN THET NAING WIN, South Eastern (Mon State) Regional commanders 2007BUR0073 BUR Hlaing MAJ-GEN MIN AUNG HLAING, Triangle (Shan State (East)) Regional commanders 2007BUR0074 BUR Lwin BRIG-GEN WAI LWIN, Naypyidaw (new regional commander position) Regional commanders 2007BUR0075 BUR Oo SWE SWE OO, Wife of Brig-Gen Wai Lwin Regional commanders 2007BUR0076 BUR Phyo WAI PHYO, Son of Brig-Gen Wai Lwin Regional commanders 2007BUR0077 BUR Yamin LWIN YAMIN, Daughter of Brig-Gen Wai Lwin Regional commanders 2007BUR0078 BUR Tun COL KYAW KYAW TUN, Rangoon (Yangon) Dep. Regional Commanders 2007BUR0079 BUR Latt KHIN MAY LATT, Wife of Col Kyaw Kyaw Tun Dep. Regional Commanders 2007BUR0080 BUR Win BRIG-GEN NAY WIN a.k.a NE WIN, Central Dep. Regional Commanders 2007BUR0081 BUR Mya NAN AYE MYA, Wife of Brig-Gen Nay Win Dep. Regional Commanders 2007BUR0082 BUR Ohn BRIG-GEN TIN MAUNG OHN, North-Western Dep. Regional Commanders 2007BUR0083 BUR Tun BRIG-GEN SAN TUN, Northern Dep. Regional Commanders 2007BUR0084 BUR Sein TIN SEIN, Wife of Brig-Gen San Tun Dep. Regional Commanders 2007BUR0085 BUR Myint BRIG-GEN HLA MYINT, North-Eastern Dep. Regional Commanders 2007BUR0086 BUR Hlaing SU SU HLAING, Wife of Brig-Gen Hla Myint Dep. Regional Commanders 2007BUR0087 BUR Lin BRIG-GEN WAI LIN, Triangle Dep. Regional Commanders 2007BUR0088 BUR Myint BRIG-GEN WIN MYINT, Eastern Dep. Regional Commanders 2007BUR0089 BUR Min COL ZAW MIN a.k.a BRIG-GEN ZAW MIN, South-Eastern Dep. Regional Commanders 2007BUR0090 BUR Wai NYUNT NYUNT WAI, Wife of Col Zaw Min Dep. Regional Commanders 2007BUR0091 BUR Ngaing BRIG-GEN HONE NGAING/HON NGAI, Coastal Dep. Regional Commanders 2007BUR0092 BUR Ni BRIG-GEN (THURA) MAUNG NI, Southern Dep. Regional Commanders 2007BUR0093 BUR Sein NAN MYINT SEIN, Wife of Brig-Gen Thura Maung Ni Dep. Regional Commanders 2007BUR0094 BUR Swe BRIG-GEN TINT SWE, South-Western Dep. Regional Commanders 2007BUR0095 BUR Thaung KHIN THAUNG, Wife of Brig-Gen Tint Swe Dep. Regional Commanders 2007BUR0096 BUR Swe YE MIN a.k.a YE KYAW SWAR SWE, Son of Brig-Gen Tint Swe Dep. Regional Commanders 2007BUR0097 BUR Swe SU MON SWE, Wife of Ye Min Dep. Regional Commanders 2007BUR0098 BUR Hlaing BRIG-GEN TIN HLAING, Western Dep. Regional Commanders 2007BUR0099 BUR Oo MAJ-GEN HTAY OO, Agriculture and Irrigation (since 18.9.2004) (previously Cooperatives since 25.8.2003); Secretary-General of the USDA Ministers 2007BUR0100 BUR Win NI NI WIN, Wife of Maj-Gen Htay Oo Ministers 2007BUR0101 BUR Nyo THEIN ZAW NYO, Cadet. Son of Maj-Gen Htay Oo Ministers 2007BUR0102 BUR Thein BRIG-GEN TIN NAING THEIN, Commerce (since 18.9.2004), Previously Dep Minister of Forestry - DOB. 1955 Ministers 2007BUR0103 BUR Aye AYE AYE, Wife of Brig-Gen Tin Naing Thein Ministers 2007BUR0104 BUR Tun MAJ-GEN SAW TUN, Construction (since 15.06.95) - DOB. 8.5.1935 Ministers 2007BUR0105 BUR Ko MYINT MYINT KO, Wife of Maj-Gen Saw Tun - DOB. 11.1.1945 Ministers 2007BUR0106 BUR Tun ME ME TUN, Daughter of Maj-Gen Saw Tun - DOB. 26.10.1967 Ministers 2007BUR0107 BUR Lwin MAUNG MAUNG LWIN, Husband of Me Me Tun - DOB. 2.1.1969 Ministers 2007BUR0108 BUR Htut MAJ-GEN TIN HTUT, Cooperatives (since 15.05.06) Ministers 2007BUR0109 BUR Nyunt TIN TIN NYUNT, Wife of Maj-Gen Tin Htut Ministers 2007BUR0110 BUR Myint MAJ-GEN KHIN AUNG MYINT, Culture (since 15.05.06) Ministers 2007BUR0111 BUR Phyone KHIN PHYONE, Wife of Maj-Gen Khin Aung Myint Ministers 2007BUR0112 BUR Nyein DR. CHAN NYEIN a.k.a. CHANG NYEIN, Education (since 10.08.05), Previously Deputy Minister of Science & Technology - DOB. 1944 Ministers 2007BUR0113 BUR Aung SANDAR AUNG, Wife of Dr. Chan Nyein Ministers 2007BUR0114 BUR Min COL ZAW MIN, Electric Power (1) (since 15.05.06) - DOB. 10.1.1949 Ministers 2007BUR0115 BUR Mi KHIN MI MI, Wife of Col Zaw Min Ministers 2007BUR0116 BUR Thi BRIG-GEN LUN THI, Energy (since 20.12.97) - DOB. 18.7.1940 Ministers 2007BUR0117 BUR Aye KHIN MAR AYE, Wife of Brig-Gen Lun Thi Ministers 2007BUR0118 BUR Aye MYA SEIN AYE, Daughter of Brig-Gen Lun Thi Ministers 2007BUR0119 BUR Lun ZIN MAUNG LUN, Son of Brig-Gen Lun Thi Ministers 2007BUR0120 BUR Ko ZAR CHI KO, Wife of Zin Maung Lun Ministers 2007BUR0121 BUR Tun MAJ-GEN HLA TUN, Finance & Revenue (since 01.02.03) - DOB. 11.7.1951 Ministers 2007BUR0122 BUR Win KHIN THAN WIN, Wife of Maj-Gen Hla Tun Ministers 2007BUR0123 BUR Win NYAN WIN, Foreign Affairs (since 18.9.2004), formerly Deputy Chief of Armed Forces Training, - DOB. 22.1.1953 Ministers 2007BUR0124 BUR Soe MYINT MYINT SOE, Wife of Nyan Win Ministers 2007BUR0125 BUR Aung BRIG-GEN THEIN AUNG, Forestry (since 25.08.03) Ministers 2007BUR0126 BUR Myint KHIN HTAY MYINT, Wife of Brig-Gen Thein Aung Ministers 2007BUR0127 BUR Myint PROF. DR. KYAW MYINT, Health (since 01.02.03) - DOB. 1940 Ministers 2007BUR0128 BUR Thaw NILAR THAW, Wife of Prof. Dr. Kyaw Myint Ministers 2007BUR0129 BUR Oo MAJ-GEN MAUNG OO, Home Affairs (since 05.11.04) - DOB. 1952 Ministers 2007BUR0130 BUR Oo NYUNT NYUNT OO, Wife of Maj-Gen Maung Oo Ministers 2007BUR0131 BUR Swe MAJ-GEN MAUNG MAUNG SWE, Ministry of Immigration & Population, as well as Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement (since 15.05.06) Ministers 2007BUR0132 BUR Nwe TIN TIN NWE, Wife of Maj-Gen Maung Maung Swe Ministers 2007BUR0133 BUR Swe EI THET THET SWE, Daughter of Maj-Gen Maung Maung Swe Ministers 2007BUR0134 BUR Swe KAUNG KYAW SWE, Son of Maj-Gen Maung Maung Swe Ministers 2007BUR0135 BUR Thaung AUNG THAUNG, Industry 1 (since 15.11.97) Ministers 2007BUR0136 BUR Yi KHIN KHIN YI, Wife of Aung Thaung Ministers 2007BUR0137 BUR Aung MAJOR MOE AUNG, Son of Aung Thaung Ministers 2007BUR0138 BUR Nyunt DR AYE KHAING NYUNT, Wife of Major Moe Aung Ministers 2007BUR0139 BUR Aung NAY AUNG, Son of Aung Thaung, businessman, Managing Director, Aung Yee Phyoe Co. Ltd Ministers 2007BUR0140 BUR Nyunt KHIN MOE NYUNT, Wife of Nay Aung Ministers 2007BUR0141 BUR Aung MAJOR PYI AUNG a.k.a PYE AUNG, Son of Aung Thaung Ministers 2007BUR0142 BUR Phyo KHIN NGU YI PHYO, Daughter of Aung Thaung Ministers 2007BUR0143 BUR Aung DR THU NANDA AUNG, Daughter of Aung Thaung Ministers 2007BUR0144 BUR Aung AYE MYAT PO AUNG, Daughter of Aung Thaung Ministers 2007BUR0145 BUR Lwin MAJ-GEN SAW LWIN, Industry2(since 14.11.98) - DOB. 1939 Ministers 2007BUR0146 BUR Myint MOE MOE MYINT, Wife of Maj-Gen Saw Lwin Ministers 2007BUR0147 BUR Hsan BRIG-GEN KYAW HSAN, Information (since 13.09.02) Ministers 2007BUR0148 BUR Win KYI KYI WIN, Wife of Brig-Gen Kyaw Hsan Ministers 2007BUR0149 BUR Thein BRIG-GEN MAUNG MAUNG THEIN, Livestock & Fisheries Ministers 2007BUR0150 BUR Aye MYINT MYINT AYE, Wife of Brig-Gen Maung Maung Thein Ministers 2007BUR0151 BUR Thein MIN THEIN, Son of Brig-Gen Maung Maung Thein Ministers 2007BUR0152 BUR Myint BRIG-GEN OHN MYINT, Mines (since 15.11.97) Ministers 2007BUR0153 BUR San SAN SAN, Wife of Brig-Gen Ohn Myint Ministers 2007BUR0154 BUR Oo THET NAING OO, Son of Brig-Gen Ohn Myint Ministers 2007BUR0155 BUR Oo MIN THET OO, Son of Brig-Gen Ohn Myint Ministers 2007BUR0156 BUR Tha SOE THA, National Planning & Economic Development (since 20.12.97) - DOB. 1945 Ministers 2007BUR0157 BUR Win KYU KYU WIN, Wife of Soe Tha Ministers 2007BUR0158 BUR Soe KYAW MYAT SOE, Son of Soe Tha Ministers 2007BUR0159 BUR Lay WEI WEI LAY, Wife of Kyaw Myat Soe Ministers 2007BUR0160 BUR Tha AUNG SOE THA, Son of Soe Tha Ministers 2007BUR0161 BUR Nyunt COL THEIN NYUNT, Progress of Border Areas & National Races & Development Affairs (since 15.11.97), and Mayor of Naypyidaw Ministers 2007BUR0162 BUR Khaing KYIN KHAING, Wife of Col Thein Nyunt Ministers 2007BUR0163 BUR Min MAJ-GEN AUNG MIN, Rail Transportation (since 01.02.03) Ministers 2007BUR0164 BUR Thar WAI WAI THAR a.k.a WAI WAI THA, Wife of Maj-Gen Aung Min Ministers 2007BUR0165 BUR Maung BRIG-GEN (THURA) MYINT MAUNG, Religious Affairs (since 25.08.03) Ministers 2007BUR0166 BUR Soe AUNG KYAW SOE, Son of Brig-Gen Thura Myint Maung Ministers 2007BUR0167 BUR Sandi SU SU SANDI, Wife of Aung Kyaw Soe Ministers 2007BUR0168 BUR Maung ZIN MYINT MAUNG, Daughter of Brig-Gen Thura Myint Maung Ministers 2007BUR0169 BUR Thaung THAUNG, Science & Technology (since November 1998), Concurrently Labour (since 5.11.2004) - DOB 6.7.37 Ministers 2007BUR0170 BUR Sein MAY KYI SEIN, Wife of Thaung Ministers 2007BUR0171 BUR Gyi AUNG GYI a.k.a AUNG KGYI, Son of Thaung - DOB. 1971 Ministers 2007BUR0172 BUR Myint BRIG-GEN (THURA) AYE MYINT, Sports (since 29.10.99) Ministers 2007BUR0173 BUR Aye AYE AYE, Wife of Brig-Gen Thura Aye Myint Ministers 2007BUR0174 BUR Linn NAY LINN, Son of Brig-Gen Thura Aye Myint Ministers 2007BUR0175 BUR Zaw BRIG-GEN THEIN ZAW, Minister of Telecommunications, Post & Telegraphs (since 10.05.01) - DOB. 20.10.1951 Ministers 2007BUR0176 BUR Win MU MU WIN, Wife of Brig-Gen Thein Zaw Ministers 2007BUR0177 BUR Swe MAJ-GEN THEIN SWE, Transport, since 18.9.2004 (previously PM’s Office since 25.8.2003) Ministers 2007BUR0178 BUR Theingi MYA THEINGI, Wife of Maj-Gen Thein Swe Ministers 2007BUR0179 BUR Naing MAJ-GEN SOE NAING, Minister for Hotels and Tourism (since 15.05.06) Ministers 2007BUR0180 BUR Latt TIN TIN LATT, Wife of Maj-Gen Soe Naing Ministers 2007BUR0181 BUR Oo WUT YI OO, Daughter of Maj-Gen Soe Naing Ministers 2007BUR0182 BUR Win CAPTAIN HTUN ZAW WIN, Husband of Wut Yi Oo Ministers 2007BUR0183 BUR Aye YIN THU AYE, Daughter of Maj-Gen Soe Naing Ministers 2007BUR0184 BUR Zaw YI PHONE ZAW, Son of Maj-Gen Soe Naing Ministers 2007BUR0185 BUR Myint MAJ-GEN KHIN MAUNG MYINT, Electric Power (2) (New Ministry) (since 15.05.06) Ministers 2007BUR0186 BUR Nu WIN WIN NU, Wife of Maj-Gen Khin Maung Myint Ministers 2007BUR0187 BUR Myint OHN MYINT, Agriculture & Irrigation (since 15.11.97) Deputy Ministers 2007BUR0188 BUR War THET WAR, Wife of Ohn Myint Deputy Ministers 2007BUR0189 BUR Tun BRIG-GEN AUNG TUN, Commerce (since 13.09.03) Deputy Ministers 2007BUR0190 BUR Thein BRIG-GEN MYINT THEIN, Construction (since 05.01.00) Deputy Ministers 2007BUR0191 BUR Than MYA THAN, Wife of Brig-Gen Myint Thein Deputy Ministers 2007BUR0192 BUR Swe U TINT SWE, Construction (since 07.05.98) Deputy Ministers 2007BUR0193 BUR Myint MAJ-GEN AYE MYINT, Defence (since 15.05.06) Deputy Ministers 2007BUR0194 BUR Nyunt MYO NYUNT, Education (since 08.07.99) Deputy Ministers 2007BUR0195 BUR Thein MARLAR THEIN, Wife of Myo Nyunt Deputy Ministers 2007BUR0196 BUR Min BRIG-GEN AUNG MYO MIN, Education (since 19.11.03) Deputy Ministers 2007BUR0197 BUR Nwe THAZIN NWE, Wife of Brig-Gen Aung Myo Min Deputy Ministers 2007BUR0198 BUR Myint MYO MYINT, Electric Power 1 (since 29.10.99) Deputy Ministers 2007BUR0199 BUR Myint TIN TIN MYINT, Wife of Myo Myint Deputy Ministers 2007BUR0200 BUR Moe AUNG KHAING MOE, Son of Myo Myint - DOB 25.6.67 Deputy Ministers 2007BUR0201 BUR Htay BRIG-GEN THAN HTAY, Energy (since 25.8.2003) Deputy Ministers 2007BUR0202 BUR Yi SOE WUT YI, Wife of Brig-Gen Than Htay Deputy Ministers 2007BUR0203 BUR Swe COL HLA THEIN SWE, Finance & Revenue (since 25.08.03) Deputy Ministers 2007BUR0204 BUR Win THIDA WIN, Wife of Col Hla Thein Swe Deputy Ministers 2007BUR0205 BUR Thu KYAW THU, Foreign Affairs (since 25.08.03) - DOB. 15.08.1949 Deputy Ministers 2007BUR0206 BUR Kyi LEI LEI KYI, Wife of Kyaw Thu Deputy Ministers 2007BUR0207 BUR Myint MAUNG MYINT, Foreign Affairs (since 18.9.04) Deputy Ministers 2007BUR0208 BUR Win DR KHIN MYA WIN, Wife of Maung Myint Deputy Ministers 2007BUR0209 BUR Oo PROF. DR. MYA OO, Health (since 16.11.97), - DOB. 25.1.1940 Deputy Ministers 2007BUR0210 BUR Mya TIN TIN MYA, Wife of Prof. Dr. Mya Oo Deputy Ministers 2007BUR0211 BUR Oo DR. TUN TUN OO, Son of Prof. Dr. Mya Oo - DOB. 26.7.1965 Deputy Ministers 2007BUR0212 BUR Thuzar DR. MYA THUZAR, Daughter of Prof. Dr. Mya Oo - DOB. 23.9.1971 Deputy Ministers 2007BUR0213 BUR Thidar MYA THIDAR, Daughter of Prof. Dr. Mya Oo - DOB. 10.6.1973 Deputy Ministers 2007BUR0214 BUR Nandar MYA NANDAR, Daughter of Prof. Dr. Mya Oo - DOB. 29.5.1976 Deputy Ministers 2007BUR0215 BUR Swe BRIG-GEN PHONE SWE, Home Affairs (since 25.8.2003) Deputy Ministers 2007BUR0216 BUR Wai SAN SAN WAI, Wife of Brig-Gen Phone Swe Deputy Ministers 2007BUR0217 BUR Kyu BRIG-GEN AYE MYINT KYU, Hotels & Tourism (since 16.11.97) Deputy Ministers 2007BUR0218 BUR Myint KHIN SWE MYINT, Wife of Brig-Gen Aye Myint Kyu Deputy Ministers 2007BUR0219 BUR Sein BRIG-GEN WIN SEIN, Immigration & Population (since November 2006) Deputy Ministers 2007BUR0220 BUR Linn WAI WAI LINN, Wife of Brig-Gen Win Sein Deputy Ministers 2007BUR0221 BUR Kyaw LT-COL KHIN MAUNG KYAW, Industry2(since 05.01.00) Deputy Ministers 2007BUR0222 BUR Wai MI MI WAI, Wife of Lt-Col Khin Maung Kyaw Deputy Ministers 2007BUR0223 BUR Kyi MAJ-GEN AUNG KYI, Labour (since November 2006) Deputy Ministers 2007BUR0224 BUR Swe THET THET SWE, Wife of Maj-Gen Aung Kyi Deputy Ministers 2007BUR0225 BUR Ngwe COL TIN NGWE, Progress of Border Areas & National Races & Development Affairs (since 25.08.03) Deputy Ministers 2007BUR0226 BUR Chit KHIN MYA CHIT, Wife of Col Tin Ngwe Deputy Ministers 2007BUR0227 BUR Lwin (THURA) THAUNG LWIN, Rail Transportation (since 16.11.97) Deputy Ministers 2007BUR0228 BUR Htwe DR YI YI HTWE, Wife of Thura Thaung Lwin Deputy Ministers 2007BUR0229 BUR Ko BRIG-GEN (THURA) AUNG KO, Religious Affairs, USDA CEC member (since 17.11.97) Deputy Ministers 2007BUR0230 BUR Yee MYINT MYINT YEE a.k.a YI YI MYINT, Wife of Brig-Gen Thura Aung Ko Deputy Ministers 2007BUR0231 BUR Soe KYAW SOE, Science and Technology (since 15.11.04) Deputy Ministers 2007BUR0232 BUR Zaw COL THUREIN ZAW, National Planning and Economic Development (since 10.08.05) Deputy Ministers 2007BUR0233 BUR Myint TIN OHN MYINT, Wife of Col Thurein Zaw Deputy Ministers 2007BUR0234 BUR Myint BRIG-GEN KYAW MYINT, Social Welfare, Relief & Resettlement (since 25.08.03) Deputy Ministers 2007BUR0235 BUR Nwe KHIN NWE NWE, Wife of Brig-Gen Kyaw Myint Deputy Ministers 2007BUR0236 BUR Than PE THAN, Rail Transportation (since 14.11.98) Deputy Ministers 2007BUR0237 BUR Tun CHO CHO TUN, Wife of Pe Than Deputy Ministers 2007BUR0238 BUR Aung COL NYAN TUN AUNG, Transport (since 25.08.03) Deputy Ministers 2007BUR0239 BUR Wai WAI WAI, Wife of Col Nyan Tun Aung Deputy Ministers 2007BUR0240 BUR Soe DR PAING SOE, Health (additional Deputy Minister) (since 15.05.06) Deputy Ministers 2007BUR0241 BUR Aung CAPT. (RET'D.) HTAY AUNG, Director General at Hotels & Tourism Directorate (previously Managing Director, Myanmar Hotels and Tourism Services until August 2004) Tourism related appointments 2007BUR0242 BUR Shwe TIN MAUNG SHWE, Deputy Director General, Hotels and Tourism Directorate Tourism related appointments 2007BUR0243 BUR Thein SOE THEIN, Managing Director, Myanmar Hotels and Tourism Services since October 2004 (previously General Manager) Tourism related appointments 2007BUR0244 BUR Soe KHIN MAUNG SOE, General Manager Tourism related appointments 2007BUR0245 BUR Swe TINT SWE, General Manager Tourism related appointments 2007BUR0246 BUR Naing LT-COL YAN NAING, General Manager, Ministry of Hotels & Tourism Tourism related appointments 2007BUR0247 BUR Aye KYI KYI AYE, Director for Tourism Promotion, Ministry of Hotels & Tourism Tourism related appointments 2007BUR0248 BUR Swe LT GEN MYINT SWE, Chief of Bureau of Special Operations5(Naypyidaw, Rangoon/Yangon) Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0249 BUR Htay KHIN THET HTAY, Wife of Lt-Gen Myint Swe Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0250 BUR Shwe MAJ-GEN HLA SHWE, Deputy Adjutant General Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0251 BUR Maung MAJ-GEN SOE MAUNG, Judge Advocate General Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0252 BUR Htaik MAJ-GEN THEIN HTAIK a.k.a HTEIK, Inspector General Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0253 BUR Hla MAJ-GEN SAW HLA, Provost Marshal Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0254 BUR Maw CHO CHO MAW, Wife of Maj-Gen Saw Hla Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0255 BUR Kyaw MAJ-GEN HTIN AUNG KYAW, Vice Quarter Master General Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0256 BUR Maw KHIN KHIN MAW, Wife of Maj-Gen Htin Aung Kyaw Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0257 BUR Maung MAJ-GEN LUN MAUNG, Auditor General Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0258 BUR Win MAJ-GEN NAY WIN, Military Assistant to the SPDC Chairman Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0259 BUR Hsint MAJ-GEN HSAN HSINT, Military Appointments General - DOB 1951 Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0260 BUR Lay KHIN MA LAY, Wife of Maj-Gen Hsan Hsint Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0261 BUR Sint OKKAR SAN SINT, Son of Maj-Gen Hsan Hsint Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0262 BUR Thein MAJ-GEN HLA AUNG THEIN, Camp Commandant, Rangoon Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0263 BUR Khaing AMY KHAING, Wife of Hla Aung Thein Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0264 BUR Myint MAJ-GEN YE MYINT, Chief of Military Affairs Security Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0265 BUR Ngwe MYAT NGWE, Wife of Maj-Gen Ye Myint Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0266 BUR Win BRIG-GEN MYA WIN, Commandant, National Defence College Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0267 BUR Oo BRIG-GEN TUN TUN OO, Director of Public Relations and Psychological Warfare Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0268 BUR Tun MAJ-GEN THEIN TUN, Director of Signals; member of National Convention Convening Management Committee Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0269 BUR Htay MAJ-GEN THAN HTAY, Director of Supply & Transport Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0270 BUR Tint MAJ-GEN KHIN MAUNG TINT, Director of Security Printing Works Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0271 BUR Lin MAJ-GEN SEIN LIN, Director, MOD (Formerly Director Ordnance) Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0272 BUR Win MAJ-GEN KYI WIN, Director of Artillery & Armour, Board member UMEHL Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0273 BUR Tun MAJ-GEN TIN TUN, Director Military Engineers Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0274 BUR Thein MAJ-GEN AUNG THEIN, Director Resettlement Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0275 BUR Yi HTWE YI, Wife of Maj-Gen Aung Thein Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0276 BUR Win BRIG-GEN ZAW WIN, Deputy Chief of Armed Forces Training Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0277 BUR Maung BRIG-GEN THAN MAUNG, Deputy Commandant of National Defence College Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0278 BUR Myint BRIG-GEN WIN MYINT, Rector, Defence Services Technological Academy Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0279 BUR Pyae BRIG-GEN YAR PYAE, Rector, Defence Services Medical Academy Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0280 BUR Sein BRIG-GEN THAN SEIN, Commandant, Defence Services Hospital, Mingaladon, Bago - DOB. 1.2.1946 Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0281 BUR Than ROSY MYA THAN, Wife of Brig-Gen Than Sein Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0282 BUR Than BRIG-GEN WIN THAN, Director of Procurement and Managing Director Union of Myanmar Economic Holdings Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0283 BUR Maung BRIG-GEN THAN MAUNG, Director of Peoples’ Militia & Frontier Forces Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0284 BUR Win MAJ-GEN KHIN MAUNG WIN, Director Defense Industries Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0285 BUR Khine BRIG-GEN KYAW SWA KHINE, Director Defense Industries Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0286 BUR Aung BRIG-GEN WIN AUNG, Member of Civil Service Selection and Training Board Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0287 BUR Oo BRIG-GEN SOE OO, Member of Civil Service Selection and Training Board Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0288 BUR Tun BRIG-GEN NYI TUN a.k.a NYI HTUN, Member of Civil Service Selection and Training Board Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0289 BUR Aung BRIG-GEN KYAW AUNG, Member of Civil Service Selection and Training Board Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0290 BUR Hlaing MAJ-GEN MYINT HLAING, Chief of Staff (Air Defence) Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0291 BUR Sin KHIN THANT SIN, Wife of Maj-Gen Myint Hlaing Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0292 BUR Hlaing HNIN NANDAR HLAING, Daughter of Maj-Gen Myint Hlaing Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0293 BUR Hlaing THANT SIN HLAING, Son of Maj-Gen Myint Hlaing Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0294 BUR Win MAJ-GEN MYA WIN, Director, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0295 BUR Soe MAJ-GEN TIN SOE, Director, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0296 BUR Aung MAJ-GEN THAN AUNG, Director, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0297 BUR Thein MAJ-GEN NGWE THEIN, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) 2007BUR0298 BUR Thein VICE-ADMIRAL SOE THEIN, Commander-in-Chief (Navy) Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0299 BUR Kyin KHIN AYE KYIN, Wife of Vice Admiral Soe Thein Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0300 BUR Aye YIMON AYE, Daughter of Vice Admiral Soe Thein - DOB. 12.7.1980 Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0301 BUR Chan AYE CHAN, Son of Vice Admiral Soe Thein - DOB. 23.9.1973 Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0302 BUR Aye THIDA AYE, Daughter of Vice Admiral Soe Thein - DOB. 23.03.1979 Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0303 BUR Tun COMMODORE NYAN TUN, Chief of Staff (Navy), Board member UMEHL Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0304 BUR Myint KHIN AYE MYINT, Wife of Nyan Tun Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0305 BUR Shein COMMODORE WIN SHEIN, Commander, Naval Training Headquarters Senior Military Officers (BrigGen and above) - Navy 2007BUR0306 BUR Hein LT-GEN MYAT HEIN, Commander-in-Chief (Air) Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0307 BUR Nyunt HTWE HTWE NYUNT, Wife of Lt-Gen Myat Hein Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0308 BUR Pe BRIG-GEN YE CHIT PE, Staff of Commander in Chief (Air), Mingaladon Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0309 BUR Tin BRIG-GEN KHIN MAUNG TIN, Commandant of Shande Air Training School, Meiktila Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0310 BUR Yaw BRIG-GEN ZIN YAW, Chief of Staff (Air), Member of UMEHL Board Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0311 BUR Thiri KHIN THIRI, Wife of Brig-Gen Zin Yaw Senior Military Officers (BrigGen and above) - Airforce 2007BUR0312 BUR Min BRIG-GEN HLA MIN, 11 LID Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0313 BUR Lin BRIG-GEN TUN NAY LIN, 22 LID Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0314 BUR Aung BRIG-GEN TIN TUN AUNG, 33 LID, Sagaing Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0315 BUR Shwe BRIG-GEN HLA MYINT SHWE, 44 LID Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0316 BUR Myint BRIG-GEN WIN MYINT, 77 LID, Bago Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0317 BUR Lwin BRIG-GEN TIN OO LWIN, 99 LID, Meiktila Senior Military Officers (BrigGen and above) - Light Infantry Divisions (LID) 2007BUR0318 BUR Win BRIG-GEN HTEIN WIN, Taikkyi Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0319 BUR Aye BRIG-GEN KHIN MAUNG AYE, Meiktila Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0320 BUR Lwin BRIG-GEN KYAW OO LWIN, Kalay Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0321 BUR Win BRIG-GEN KHIN ZAW WIN, Khamaukgyi Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0322 BUR Aung BRIG-GEN KYAW AUNG, Southern MR, Toungoo Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0323 BUR Oo BRIG-GEN THET OO, Commander of Military Operations Command - 16 Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0324 BUR Hein BRIG-GEN MYINT HEIN, Military Operations Command -3, Mogaung Station, Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0325 BUR Ngwe BRIG-GEN TIN NGWE, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0326 BUR Lwin BRIG-GEN MYO LWIN, Military Operations Command -7, Pekon Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0327 BUR Soe BRIG-GEN MYINT SOE, Military Operations Command -5, Taungup Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0328 BUR Aye BRIG-GEN MYINT AYE, Military Operations Command -9, Kyauktaw Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0329 BUR Hlaing BRIG-GEN NYUNT HLAING, Military Operations Command -17, Mong Pan Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0330 BUR Myint BRIG-GEN OHN MYINT, Mon State USDA CEC member Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0331 BUR Nwe BRIG-GEN SOE NWE, Military Operations Command -21 Bhamo Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0332 BUR Tun BRIG-GEN THAN TUN, Kyaukpadaung Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0333 BUR Aung BRIG-GEN THAN TUN AUNG, Regional Operations Command-Sittwe Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0334 BUR Htaik BRIG-GEN THAUNG HTAIK, Aungban Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0335 BUR Hteik BRIG-GEN THEIN HTEIK, Military Operations Command -13, Bokpyin Station Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0336 BUR Thein BRIG-GEN (THURA) MYINT THEIN, Namhsan Tactical Operations Command Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0337 BUR Aung BRIG-GEN WIN AUNG, Mong Hsat Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0338 BUR Tint BRIG-GEN MYO TINT, Officer on Special Duty Ministry of Transport Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0339 BUR Thaung BRIG-GEN (THURA) SEIN THAUNG, Officer on Special Duty Ministry for Social Welfare Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0340 BUR Han BRIG-GEN PHONE ZAW HAN, Mayor of Mandalay since February 2005, formerly commander of Kyaukme Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0341 BUR Myint BRIG-GEN WIN MYINT, Pyinmana Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0342 BUR Swe BRIG-GEN KYAW SWE, Pyin Oo Lwin Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0343 BUR Win BRIG-GEN SOE WIN, Bahtoo Station Commander Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0344 BUR Htay BRIG-GEN THEIN HTAY, Ministry of Defence Senior Military Officers (BrigGen and above) - Other Brig-Gens 2007BUR0345 BUR Yi MAJ-GEN KHIN YI, DG Myanmar Police Force Military Officers running prisons and police 2007BUR0346 BUR Soe KHIN MAY SOE, Wife of Maj-Gen Khin Yi Military Officers running prisons and police 2007BUR0347 BUR Win ZAW WIN, Director General of the Prisons Dept. (Ministry of Home Affairs) since August 2004, previously Deputy DG Myanmar Police Force, and former Brig-Gen. Former military. Military Officers running prisons and police 2007BUR0348 BUR Win AUNG SAW WIN, Director General, Bureau of Special Investigation Military Officers running prisons and police 2007BUR0349 BUR Lin BRIG-GEN AUNG THEIN LIN, Mayor & Chairman of the Yangon City Development Committee (Secretary) Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0350 BUR Nwe KHIN SAN NWE, Wife of Brig-Gen Aung Thein Lin Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0351 BUR Myo THIDAR MYO, Daughter of Brig-Gen Aung Thein Lin Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0352 BUR Par COL MAUNG PAR, Vice Mayor of YCDC (CEC Member) Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0353 BUR Myaing KHIN NYUNT MYAING, Wife of Col Maung Par Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0354 BUR Par NAING WIN PAR, Son of Col Maung Par Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0355 BUR Nyein DR CHAN NYEIN, CEC Member Union Solidarity and Development Assoc (USDA) (senior USDA office-holders who have not been included elsewhere) 2007BUR0356 BUR Za TAY ZA, Managing Director, Htoo Trading Co - DOB 18.07.1964 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0357 BUR Zaw THIDAR ZAW, Wife of Tay Za - DOB 24.02.1964 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0358 BUR Za PYE PHYO TAY ZA, Son of Tay Za - DOB. 29.01.1987 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0359 BUR Thiha THIHA, Brother of Tay Za, Director Htoo Trading. Distributor of London cigarettes (Myawaddy Trading) - DOB.24.6.1960 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0360 BUR Shwe SHWE SHWE, Wife of Thiha Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0361 BUR Win AUNG KO WIN a.k.a. SAYA KYAUNG, Chairman of Kanbawza Bank Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0362 BUR Htwe NAN THAN HTWE, Wife of Aung Ko Win Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0363 BUR Kham NANG LANG KHAM, Daughter of Aung Ko Win and Nan Than Htwe - DOB 1.6.88 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0364 BUR Hom NANG MO HOM, Daughter of Aung Ko Win and Nan Than Htwe - DOB 18.4.96 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0365 BUR Noung NANG KHAM NOUNG, Daughter of Aung Ko Win and Nan Than Htwe - DOB 5.8.91 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0366 BUR Naing TUN MYINT NAING a.k.a. STEVEN LAW, Asia World Co. Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0367 BUR Ng NG SENG HONG a.k.a. CECILIA NG, Wife of Tun Myint Naing Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0368 BUR Shwe KHIN SHWE, Zaykabar Co - DOB 21.01.1952 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0369 BUR Kywe SAN SAN KYWE, Wife of Khin Shwe Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0370 BUR Thiha ZAY THIHA, Son of Khin Shwe- DOB. 01.01.1977 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0371 BUR Myint HTAY MYINT, Chairman Yuzana Co.- DOB. 06.02.1955 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0372 BUR Maw AYE AYE MAW, Wife of Htay Myint- DOB. 17.11.1957 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0373 BUR Htay ZAR CHI HTAY, Daughter of Htay Myint, Director Yuzana Co. - DOB. 17.2.1981 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0374 BUR Lin KHIN HTAY LIN, Director Yuzana Co- DOB. 14.04.1969 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0375 BUR Myint HTUN MYINT, Engineer Yuzana Co. - DOB. 18.08.1962 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0376 BUR Pa WIN PA PA, Secretary Yuzana Co- DOB. 22.12.1971 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0377 BUR Win KYAW WIN, Shwe Thanlwin Trading Co. Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0378 BUR Sai NAN MAUK LOUNG SAI a.k.a. NANG MAUK LAO HSAI, Wife of Kyaw Win Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0379 BUR Tin MAJ-GEN (RET'D) NYUNT TIN, Former Minister of Agriculture & Irrigation, ret’d September 2004 Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0380 BUR Oo KHIN MYO OO, Wife of Maj-Gen (Ret’d) Nyunt Tin Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0381 BUR Nyunt KYAW MYO NYUNT, Son of Maj-Gen (Ret’d) Nyunt Tin Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0382 BUR Han THU THU EI HAN, Daughter of Maj-Gen (Ret’d)Nyunt Tin Persons Who Benefit From Government Economic Policies 2007BUR0383 BUR Hlaing MAJ-GEN (RET'D) WIN HLAING, Formerly MD, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank Military Owned Enterprises 2007BUR0384 BUR Ngeh MA NGEH, Daughter of Maj-Gen (Ret’d) Win Hlaing Military Owned Enterprises 2007BUR0385 BUR Naing ZAW WIN NAING, Managing Director of Kambawza Bank, husband of Ma Ngeh, and nephew of Aung Ko Win Military Owned Enterprises 2007BUR0386 BUR Hlaing WIN HTWAY HLAING, Son of Maj-Gen (Ret’d) Win Hlaing, representative for KESCO company Military Owned Enterprises 2007BUR0387 BUR Htut COL YE HTUT, Myanmar Economic Corporation Military Owned Enterprises 2007BUR0388 BUR Aung COL MYINT AUNG, MD at Myawaddy Trading Co. - DOB 11.8.49 Military Owned Enterprises 2007BUR0389 BUR Yee NU NU YEE, Wife of Myint Aung, lab technician - DOB 11.11.54 Military Owned Enterprises 2007BUR0390 BUR Aung THIHA AUNG, Son of Myint Aung, employed by Schlumberger - DOB 11.6.82 Military Owned Enterprises 2007BUR0391 BUR Aung NAY LINN AUNG, Son of Myint Aung, seaman- DOB 11.04.81 Military Owned Enterprises 2007BUR0392 BUR Myint COL MYO MYINT, MD Bandoola Transportation Co. Military Owned Enterprises 2007BUR0393 BUR Zin COL (RET'D) THANT ZIN, MD at Myanmar Land and Development Military Owned Enterprises 2007BUR0394 BUR Aye LT-COL (RET'D) MAUNG MAUNG AYE, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL), Chairman Myanmar Breweries Military Owned Enterprises 2007BUR0395 BUR San COL AUNG SAN, MD at Hsinmin Cement Plant Construction Project Military Owned Enterprises 2007BUR0396 BUR Nyunt GENERAL (RTD) KHIN NYUNT, Former Prime Minister - DOB. 11.10.1939 Former senior regime figures 2007BUR0397 BUR Shwe DR KHIN WIN SHWE, Wife of Khin Nyunt - DOB. 6.10.1940 Former senior regime figures 2007BUR0398 BUR Win DR YE NAING WIN, Son of Khin Nyunt Former senior regime figures 2007BUR0399 BUR Oo ZAW NAING OO, Son of Khin Nyunt Former senior regime figures 2007BUR0400 BUR Win THIN THIN MYAT WIN, Daughter of Khin Nyunt Former senior regime figures 2007BUR0401 BUR Lay KO LAY, Former Mayor of Rangoon - DOB. 31.10.1931 Former senior regime figures 2007BUR0402 BUR Khin KHIN KHIN, Wife of Ko Lay Former senior regime figures 2007BUR0403 BUR Thida KHIN THIDA, Daughter of Ko Lay Former senior regime figures 2007BUR0404 BUR Min SAN MIN, Son of Ko Lay Former senior regime figures 2007BUR0405 BUR Han THAN HAN, Son of Ko Lay Former senior regime figures 2007BUR0406 BUR Oo ZAW HTUN OO, Married to Khin Thida, son of the late SPDC Secretary2Lt-Gen Tin Oo Former senior regime figures 2007BUR0407 BUR Phone AUNG PHONE, Former Minster of Forestry- DOB. 20.2.1939 Former senior regime figures 2007BUR0408 BUR Aye KHIN SITT AYE, Wife of Aung Phone Former senior regime figures 2007BUR0409 BUR Aung SIT THAING AUNG, Son of Aung Phone - DOB. 13.11.1971 Former senior regime figures 2007BUR0410 BUR Aung SIT THWAY AUNG, Son of Aung Phone - DOB. 10.7.1977 Former senior regime figures 2007BUR0411 BUR Thein KHIN MAUNG THEIN, Former Minister for Finance Former senior regime figures 2007BUR0412 BUR Thein SU SU THEIN, Wife of Khin Maung Thein Former senior regime figures 2007BUR0413 BUR Thein THAWADAR THEIN, Daughter of Khin Maung Thein - DOB. 6.3.1958 Former senior regime figures 2007BUR0414 BUR Thein KHIN YADANA THEIN, Daughter of Khin Maung Thein - DOB. 6.5.1968 Former senior regime figures 2007BUR0415 BUR Thein MARLAR THEIN, Daughter of Khin Maung Thein - DOB. 25.2.1965 Former senior regime figures 2007BUR0416 BUR Thein HNWE THIDA THEIN, Daughter of Khin Maung Thein DOB 28.7.1966 Former senior regime figures 2007BUR0417 BUR Thein MAUNG MAUNG THEIN, Son of Khin Maung Thein DOB 23.10.1963 Former senior regime figures 2007BUR0418 BUR Thein DAYWAR THEIN, Son of Khin Maung Thein DOB 25.12.1960 Former senior regime figures
ငွေကြာယံကျောင်းတိုက် ပညာဒါနကျောင်း ယခုနှစ်မဖွင့်နိ...
ရဲဘော်ကြီး ဇာဂနာနဲ့ ရဲဘော်ကြီး ကျော်သူ သို့ အိတ်ဖွ...
စစ်အစိုးရ အရာရှိနှင့် တွေဆုံရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ (၂၄-၁၀-၀၇)
(၀ဲမှယာ) ကိုဂျင်မီ၊ ကိုသိန်းဆွေ၊ ကိုမာကီး၊ ကိုမြအေ...
ညီမောင် စစ်သည်သို့ …
ဖေဖေကိုဂျင်မီ မေမေမနီလာသိန်း တို့နဲ့ သမီးလေးဖြူနြေ...
ကျီးနှင့် ခင်ပုပ် - မောင်သာရ
စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး၊အငတ်ဘေးနဲ့ နအဖတို့ လိမ်လည်မှု...
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ အိန္ဒိယကို တနင်္ဂနွေမှာ ရောက်မည်
၈၈ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ထပ်မံ အဖမ်းခံရ
အမ်အေအိုင် ခရီးစဉ်များ အရေးပေါ် ဖျက်သိမ်း
တာမွေကျောင်းရှေ့တွင် ပြည်သူ ၇ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့
Human right violation by authority in Thailand
This shop owner is one of the main supporter of lo...
Shops on the roads are allowed .Why ? Do they pay ...
shops in front of municiple chairman's fellow hous...
Market ( left ) is more than one meter far from th...
Burma's Yangon residents call for international he...
China doesn't have heart for those who had been ki...
မြန်မာသတင်းထောက် ၅ ဦးကိုဖမ်းထားဆဲ၊လေးဦးကိုလွှတ်ပေ...
သံဃာအလောင်း သုံးလောင်း သုဝဏ္ဏဘက် မြစ်ထဲမှာ ထပ်တွေ့
သံဃာတွေကို အတင်းလူဝတ်လဲခိုင်း၊ မသေမရှင်တွေကို အတင်...
UN stand must be practical said One of the monk fr...
Burmese Refugees Trouble in Bangladesh
Burmese in Thaland's Chiang Mai ... All religions ...
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ဆန္ဒပြပွဲ (ရန်ကုန်)
စစ်အုပ်စုကျဆုံးနိဂုံချုပ်ဖို့ အတွက်၊ နိဒါဏ်း